အန်အယ်ဒီနှင့် တပ်မတော်အစုိုးရအကြား မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရသည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများစွာ အကြောင်းမရေးသားခင် ယခင်မြန်မာတီးရှော့ဖုိုရမ်တွင် ကျွန်တော်ရေးသားဆွေးနွေးခဲ့သည့် ဆောင်းပါးအား အနည်းငယ် တည်းဖြတ်ကာ ပြန်လည်ဖော်ပြ ရေးသားလုိုက်ပါသည်။ ထုိုအရာသည် အန်အယ်ဒီပါတီနှင့် ပြည်သူ၏ ထောက်ခံမှုအကြောင်းအား ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။
အန်အယ်ဒီပါတီသည် အိမ်စောင့်အစုိုးရနောက်ပုိုင်း မြန်မာနုိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံး ပြန်လည်ကျင်းပသည့် လွတ်လပ်၍တရားမျှတသော ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟု ဆုိုနုိုင်သော န၀တအစုိုးရမှ ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည့် 1990 ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရလဒ်ပြတ်သားစွာ အနုိုင်ရရှိခဲ့၏။ ဤနေရာတွင် ကျွန်တော့်အနေဖြင့် အနည်းငယ် ရယ်ဖွယ်ဖြစ်နေသည်မှာ လွတ်လပ်၍တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဆုိုသည်ကုို ချွင်းချက်မရှိ လက်ခံခဲ့ကြသည့် အတုိုက်အခံတုို့အနေဖြင့် သူတုို့လက်ခံခဲ့ခြင်းမှာ အဆုိုပါရွေးကောက်ပွဲ၏ ကျင်းပပုံစနစ်တုို့ကြောင့်လည်းကောင်း၊ နုိုင်ငံတကာမှ စောင့်ကြည့်ခွင့် စသည်တုို့ကြောင့်လည်းကောင်း မဟုတ်ပဲ အန်အယ်ဒီပါတီ အနုိုင်ရခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နေခြင်းပင်ဖြစ်၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဆုိုသော် ပါတီအနေဖြင့် အနုိုင်မရရှိခဲ့ပါက ထိုကျင်းပပုံစနစ်၊ နုိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့်ခွင့်မရခဲ့ခြင်းတုို့သည် အဆုိုပါရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်အား အသိအမှတ်မပြုရန် အကြောင်းပြချက်များ ဖြစ်လာမည်ဆုိုသည်မှာ အနုိုင်မရပါက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အား အသိမှတ်မပြုပဲ သပိတ်မှောက်ရန် အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ ကြပုံတုို့အား လေ့လာခြင်းအားဖြင့် မြင်တွေ့နုိုင်ပေသည်။
ထုို့ကြောင့် အန်အယ်ဒီပါတီသည် 90 ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အား ဆုပ်ကုိုင်အတည်ပြုထားပါ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆုိုသော် အနုိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေသည်ဟု ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချပါသည်။
ပြည်သူသည် မိမိတုို့မှ ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့သည့် အဆုိုပါပါတီအနေဖြင့်
မည်သည့်စနစ်၊ နုိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းဖြင့် နုိုင်ငံတော်အား ပုံဖော်ဦးဆောင်မှုပြုပါမည်။
မည်သည့် ဦးတည်ချက်များ၊ စီမံချက်များဖြင့် နုိုင်ငံတော်အား တုိုးတက်အောင်ပြုမည်။
မိမိတုို့အတွက် မည်သည့်အခွင့်အရေးများ၊ ဘ၀အာမခံချက်များအား တုိုးမြင့်ပေးမည့် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ထားသည်
အစရှိသော မဲပေးသူတစ်ဦးမှ သိထားသင့်သည့် ရမည့် အခြေခံအကျဆုံးအချက်များကုိုပင် မသိရှိခဲ့ပါ။ အခြားခြားသော စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံခြားရေး၊ ပညာရေးစသော အချက်များကုိုမူ ထည့်သွင်းပင် မစဉ်းစားနုိုင်သည့် အခြေအနေတွင် ရှိခဲ့ပါသည်။
ထုိုသုို့သော မည်သည့်နုိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်၊ မူဝါဒများဖြင့် အခြေခံသည်ကုိုပင် မသိသောနုိုင်သော အဆုိုပါပါတီသည် အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း နုိုင်ငံအကျိုးပြု စွမ်းဆောင်ချက်များ၊ သမုိုင်းကြောင်းများ လုံးဝမရှိသောကြောင့် အဆုိုပါအချက်များဖြင့်လည်း ချင့်ချိန်ရန်မဖြစ်နုိုင်ပါချေ။
သုို့ဆုိုလျှင် အဘယ်ကြောင့် အန်အယ်ဒီအား ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသနည်း။
အဓိကအကျဆုံး အချက်မှာ မဆလအားဆန့်ကျင်ရုံ မဲပေးကြခြင်းဖြစ်၏။ မဆလအစိုးရအပေါ် စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့နေပြီဖြစ်သော ပြည်သူသည် ထုိုအစုိုးရမဟုတ်ရင် ပီးရောဆုိုသည့် စိတ်ဓါတ်နှင့် မဲပေးခဲ့ခြင်းသည် အဓိကအချက်ဟု ကျွန်တော်မြင်ပါသည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသည်မှာ ပြည်သူသည် မဆလအစုိုးရအား ဆန့်ကျင်ရုံပီးရော မဲပေးချိန်တွင် များပြားလှသော ဘာမှန်းမသိသည့် ပါတီများအကြား အဘယ့်ကြောင့် အန်အယ်ဒီအား မဲပေးခဲ့ပါသနည်း။ ထုိုအချိန်က အန်အယ်ဒီပါတီတွင် ဗိုလ်ချုပ်ပြုတ်များ၊ စစ်အရာရှိဟောင်းများနှင့် ဒေါ်စုကြည်တုို့ ဦးဆောင်နေပါ၏။ ပြည်သူသည် ထုိုအရာရှိပြုတ်များဟာ စိတ်မ၀င်စားလှသည့်အပြင် အမြင်မကြည်သည့် စိတ်သည်ပင် ရှိကြပါ၏။ ဒေါ်စုကြည်သည်လည်း ပြည်သူ့အနေဖြင့် မုိုးကျနတ်သမီးအလား ဘာမှန်းမသိပဲ ရုတ်တရက်ပေါ်လာသော အရာကြီးတစ်ခု ဖြစ်နေပါသည်။ ထုိုအခါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အရှိန်သည် ပြည်သူသုို့ ကြီးစွာလွှမ်းမုိုးမှု ပြုပါတော့၏။ မဆလအား ဆန့်ကျင်စိတ်ဖြင့် ဘယ်သုို့ ကပ်ရမည်မသိသော လမ်းပျောက်ပြည်သူသည် ဗိုလ်ချုပ်အရှိန်ဖြင့် ဒေါ်စုကြည်ထံစုရုံးကြပါ၏။ နုိုင်ငံခြားမှ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်သည်ဆုိုသည့် အမြင်ကလည်း သူတုို့အား ပုိုမုိုအထင်ကြီးစေပါ၏။
ထုိုသုို့လေ့လာမိသောအခါ 1990 ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနုိုင်ရခဲ့ပါသည်ဆုိုသည့် အန်အယ်ဒီပါတီသည် မည်သည့် ဒီမုိုကရေစီစနစ်၊ လမ်းစဉ်၊ နုိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်း၊ စွမ်းဆောင်အားထုတ်မှုအရည်အချင်းတုို့ ကြောင့်မှမဟုတ်ပဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလွှမ်းမုိုးမှုများ၊ မှီရာစွဲကပ်မှုများဖြင့်သာ အနုိုင်ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်နေသည်ကုို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထုိုသုို့ ပါတီအား နုိုင်ငံရေးအမြင်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်လည်း ပါတီအနေဖြင့် မူလဒီမုိုကရေစီ နုိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှ အဘယ်မျှသွေဖယ်နေပြီဆုိုသည်ကုိုလည်း သတိမထားမိကြပါတော့ချေ။ ထုိုသို့ လမ်းကြောင်းမမှန်သော ရွေးချယ်မှုရလဒ်ကြောင့်လည်း သက်တမ်းနုလှသော ပါတီ၏ အတွင်းပုိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသည်ပါ စနစ်ကျသည့် လမ်းစဉ်အားအခြေမခံနုိုင်တော့ပဲ ပုဂ္ဂလိက လွှမ်းမုိုးမှုကုိုသာ အားထားအမှီပြုရသည့် အခြေအနေသုို့ ရုိုက်ခတ်ခြင်း ခံရပါတော့၏။
သုို့သော် ပါတီအနေဖြင့် ပြန်ကြည့်မည်ဆုိုလျှင်လည်း အဆုိုပါအချိန်သည် ရှုပ်ထွေးလှသော အခြေအနေအတွင်း ပါတီအား အသေအချာတည်ဆောက်ရန် အချိန်မပေးနုိုင်သော၊ အမျိုးမျုိုးပြောင်းလဲနေသော အနေအထားများကြားတွင် မိမိတုို့၏ လမ်းစဉ်များ အယူဝါဒများသည်ပင် စမ်းတ၀ါးဝါးနုိုင်နေသော အခြေအနေဖြစ်ပါ၏။ နုနယ်လှသော ပါတီသက်တမ်းသည်လည်း ပြောင်မြောက်သော စွမ်းဆောင်ချက်များ နုိုင်ငံအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်ရန် မဖြစ်နုိုင်သေးသော အခါလည်း ဖြစ်ပေသည်။
အံ့သြောဖွယ်ကောင်းသည်မှာ ယခုအနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာမြင့်ပီးနောက် မြန်မာ့နုိုင်ငံရေး အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။
ပြည်သူ၏ အန်အယ်ဒီအား ထောက်ခံမှုသည် ယခင်အချိန်များနှင့် များစွာမကွာခြားလှပဲ တပ်မတော်အစုိုးရအား ဆန့်ကျင်ရုံဆုိုသော စိတ်သာရှိနေပြီး အခြားမည်သည့် အချက်မျှမရှိသေးပါချေ။
လွန်ခဲ့သောကာလက မိမိတို့ ထောက်ခံအားပေးခဲ့သည့် ပါတီ၏ လမ်းစဉ်များ၊ စီမံချက်များ၊ ဦးတည်ချက်များအား သေချာစွာမသိရှိခဲ့သော ထုိုသူတုို့သည် ယခုအချိန်တွင်လည်း မသိရှိကြပါသေးချေ။
ပါတီသက်တမ်းနုလှသောကြောင့် နုိုင်ငံအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ၊ စွမ်းဆောင်ချက်များအား ဘာမှလုပ်ပြနုိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသည့် အဆုိုပါပါတီသည် အနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာပြီးသည့် အချိန်ထိလည်း ဘာမှလုပ်မပြနုိုင်သေးပါချေ။
ထုို့ပြင် ပါတီတွင်းတည်ဆောက်ပုံသည်လည်း စတင်စဉ်ကာလကဲ့သုို့ပင် စနစ်တကျမရှိသေးခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လွှမ်းမုိုးမှုသည် ပုိုမုိုဆုိုးဝါးစွာ ပြင်းထန်အားကောင်းလာခြင်း၊ လမ်းစဉ်များ ဦးတည်ချက်များ အားလုံးသည်လည်း စမ်းတ၀ါးဝါးပင် ဖြစ်နေသေးခြင်းတုို့အား တွေ့မြင်ရပါ၏။
ထုိုသုို့ ထုိုသုို့လေ့လာမိသောအခါ။ ကျွန်တော်တုို့သည် နုိုင်ငံအား ဆက်လက်မောင်းနှင်ရန် လွန်ခဲ့သည့် ဆယ့်ရှစ်နှစ်ကျော်က ဖုတ်ပူမီးတုိုက်နုိုင်လှသည့် ရလဒ်တစ်ခုကိုသာ မဖြစ်မနေ ဖက်တွယ်ထားသင့် ပါသည်လား။ ပါတီ၏ ပျက်ယွင်းနေသော အနေအထားများအား လစ်လျူရှုပေးထားသင့်ပါသည်လား။ ထုို့ကြောင့် အန်အယ်ဒီပါတီအနေဖြင့် မိမိအချိန်များအား လွန်ခဲ့သည့် ရလဒ်အပေါ်တွင်သာ ဖက်တွယ်လျှက် ချစားသကဲ့သုို့ အကုန်ခံမည့်အစား တပ်မတော်အစုိုးရမှ မဖြစ်မနေဦးဆောင်ကျင်းပတော့မည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် ဒုတိယအကြိမ် လွတ်လပ်၍တရားမျှတသော ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေရန် လုိုအပ်သည့် အချက်များအား ဖိအားပေးဆောင်ရွက်ခြင်းကုိုသာ အဓိကထား လှုပ်ရှားရန်သင့်ပါ၏။ တဖက်မှလည်း ပါတီအား စည်းစနစ်ကျန ခုိုင်မာသည့် အဆင့်မှီ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ပြုပြင်သင့်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် အစုိုးရအပေါ် ငြီးငွေ့စိတ်ပျက်နေသော ပြည်သူအများစုသည်လည်း ပါတီအား ထောက်ခံရန်အသင့်ရှိနေကြမည်ဟု လေ့လာမိ၏။
ုထုိုသို့ပြုခြင်းအားဖြင့် ရှေ့ဆက်တုိုးရန်လမ်းမရှိပဲ စမ်းတ၀ါးဝါးနုိုင်လှသော ပါတီအနေဖြင့် ကောင်းမွန်သော ရလဒ်ဖြစ်ထွန်းမည် ဖြစ်မည့်အပြင် နုိုင်ငံအတွက်လည်း တည်ငြိမ်မှုများဖြင့် ရှေ့ဆက်နုိုင်မည်ဖြစ်ပေ၏။ ထုို့ကြောင့် နုိုင်ငံအတွက်ဟုဆုိုကာ လှုပ်ရှားနေကြသည့်၊ ရုန်းကန်ခဲ့ကြသည့်၊ စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြသည့် သင်တုို့၏နှစ်နှစ်ဆယ်သည် လည်ပြန်ကြည့်မည်ဆုိုလျှင် အကျပ်တည်းများဖြင့် အခက်တွေ့နေသည့် မြန်မာနုိုင်ငံတော်ကြီးအား ၀မ်းနည်းဖွယ်တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တုို့ပုံဖော်ချင်သည့် နုိုင်ငံတော် ဖြစ်ခဲ့ပါသလား။ ပုိုမုို စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာ ထုိုနုိုင်ငံ့အကျပ်အတည်းသည် လက်ရှိအစုိုးရကြောင့်သာဟု ပုံဖော်ဟစ်ကြွေးနေကြသော်လည်း သင်တုို့၏လမ်းကြောင်းများ၊ လှုပ်ရှားမှုများသည် ထုိုအရာများအား ပုိုမုိုဆုိုးဝါးစေမည့် အထောက်အပံ့များသာ အစဉ်တစုိုက် ဖြစ်နေခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်၏။ သင်တုို့သည်လည်း ထုိုအချက်ကုို သိလျက်နှင့် မျက်ကွယ်ပြုထားခြင်းပင် ဖြစ်၏။ ထိုလမ်းကြောင်းများကုိုသာ ဆက်လက်စွဲကုိုင်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်နုိုင်ပါသည်ဟု ယူဆပါသည်လား။
Posted by MyoMyanmar at 6:13 PM4comments
လူအများ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ကရအတိုက်ခံပါတီဖြစ်သော အန်အယ်ဒီပါတီသည် ကျင်းပအတည်ပြုခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် အညီပြုလုပ်မည့် 2010 ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း ပြုမည် (သို့) မပြုမည်ဆိုသည့် အခြေအနေ၊ ပါတီ၏ လှုပ်ရှားမှုများ စသည်တို့အပေါ်တွင် ကျွန်တော့်လေ့လာချက်ကို ဖော်ပြလိုသောကြောင့် ယခုဆောင်းပါးအား ရေးသားခြင်း ဖြစ်၏။
ကြေငြာချက်ထုတ်ကာ၊ စာဖြင့်ပေဖြင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲအား ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း လုံးဝမပြုဟု ပြောဆိုခြင်းကို တရားဝင်မတွေ့ရှိသော်ငြားလည်း ယခုချိန်ထိမူ အဆိုပါပါတီသည် အတည်ပြုခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအား ကန့်ကွက်လျှက် မိမိတို့၏ ၉၀ ရလဒ်ပယ်ဖျက်မှုအပေါ် လက်မခံနိုင်ကြောင်း အစဉ်တစိုက်ပင် ပြောဆိုခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပေသည်။ ဤနေရာတွင် မိမိတို့သည် အဆိုပါကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲသို့ လုံး၀၀င်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း တရားဝင် ကြေငြာချက်ထုတ်ကာ ပြောကြားခြင်းဖြင့် အဆိုပါ ပါတီအနေဖြင့် လက်မခံကြောင်းကို ပိုမိုထင်ရှားစွာဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် ပြသရာရောက်မည် ဖြစ်သော်ငြားလည်း အဆိုပါနည်းလမ်းကိုမူ မပြုလုပ်နိုင်သေးကြောင်း သတိပြုမိပါသည်။
နိုင်ငံတကာမှ ယခုဖွဲ့စည်းပုံနှင့် 2010 ရွေးကောက်ပွဲအား လက်ခံမှုအတိုင်းအတာကို ပါတီအနေဖြင့် သေချာစွာအကဲမဖြတ်နိုင်သေးခြင်း။
အကယ်၍များ နိုင်ငံတကာ၏ အသိအမှတ်ပြုမှုသည် အားကောင်းခဲ့ပါမူ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှု မပြုခဲ့ပါက ပါတီ၏အနေအထားသည် ဘေးရောက်သွားနိုင်ပါသည်။ အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင် ထိုသူတို့၏ နေရာပျောက်သွားမည်ဖြစ်၏။
ဒေါ်စုကြည်ထံမှ မည်သည့်မှတ်ချက်မျိုးမှ ထွက်ပေါ်မလာသေးခြင်း။
ဤနေရာတွင် ပါတီအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပါတီ၏အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့သည်လည်းကောင်း ဒေါ်စုကြည်၏ ဆုံးဖြတ်မှုမပါပဲ တရားဝင်ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ဆုံးဖြတ်ရန် များစွာခက်ခဲသည့် ပါတီ၏အနေအထားကို အားလုံးသိရှိပီးဖြစ်သည်။
ဒေါ်စုကြည်အနေဖြင့်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ခက်ခဲနေသေးခြင်း။
အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရသည် ဆိုစေကာမူ သူမဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအား ပါတီမှသိရှိလိုက်နာအောင် အကြောင်းကြားမှုပြုရန်မှာ လွန်စွာလွယ်ကူမှုရှိမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သောကြောင့် သူမကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်မှုပြုရန် ခက်ခဲနေသည်ကြောင့်သာ တိကျသော လမ်းကြောင်းတစ်ခု မထွက်လာသေးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကောက်ချက်ချပါသည်။
အမှတ် (၁) တွင် ကျွန်တော်ဆိုခဲ့သည့် အချက်သည် သူမအား ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲဝံ့စွာချရန် ခက်ခဲစေပုံပေါ်သည်။ ထိုအရာအတွက် အထူးသဖြင့် အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန်တို့၏ ရပ်တည်ချက်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘယ်သို့ဆက်လက်ကာ အစိုးရကို ဖိအားပေးမည်ဆိုသည်ကို လည်းကောင်း အဆိုပါနိုင်ငံများနှင့် အကြေအလည်ဆွေးနွေးရန်မှာ၊ တိုင်ပင်ရန်မှာ (ပွင့်လင်းစွာဆိုရလျှင် လက်ဝါးရိုက် အစီအစဉ်ချရန်မှာ) အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေမည်ဟု လေ့လာမိပါသည်။ မိမိမှ လက်မခံလိုသည်မှာ သေချာသော်လည်း ထိုသို့သော အဓိက အထောက်ပံ့ပေးနေသည့် နိုင်ငံများနှင့် သေချာသည့် သဘောတူညီချက်မရှိထားပဲ လမ်းကြောင်းအားရွေးချယ်ရန်၊ တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်မှာ သူမအား ခက်ခဲစေလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ကောက်ချက်ချ၏။ ထိုသို့ဆွေးနွေးမှုများ ပြုရန်မှာမူ ယခုသူမရင်ဆိုင်နေရသည့် အကျယ်ချုပ်သည် များစွာသော အနှောင့်အယှက်တစ်ခု ဖြစ်လာချေ၏။
ထိုသို့သော အချက်များကို လေ့လာပီးနောက် အဆိုပါအန်အယ်ဒီပါတီ၏ အနေအထားအား ဆက်လက်သုံးသပ်မှု ပြုလိုပါသည်။
အခြေအနေအရပ်ရပ်တို့ကြောင့် ဒေါ်စုကြည်ပေါ်တွင်သာ လုံးဝမှီခိုခဲ့ရသော အဆိုပါပါတီသည် ဒီမိုကရေစီပါတီဖြစ်သော်ငြားလည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အာဏာ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်တွင်သာ တည်ခဲ့သည်၊ ဦးတည်လှုပ်ရှားခဲ့သည်ကို (အချို့မှ ငြင်းချက်များထုတ်စေကာမူ) အားလုံးအသိပင်ဖြစ်၏။ ထိုသို့ အနေအထားမမှန်သည့် အတွက်ကြောင့်ပင်လျှင် လက်ရှိအစိုးရအနေဖြင့် ဒေါ်စုကြည်အား ထိန်းသိမ်းထားရုံမျှဖြင့် အတိုက်အခံတို့၏ နိုင်ငံရေးတိုက်ကွက်မှန်သမျှကို အလွယ်တကူပင် ချုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းဖြစ်၏။ အမှန်ဆိုရလျှင်မူ အဆိုပါပါတီမှ နိုင်ငံရေးတိုက်ကွက်ဆိုသည်မှာ လုံးဝထွက်လာခြင်းပင်မရှိ၊ တခါတရံ အစိုးရမှ သေချာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရသည့် အနည်းငယ်သော လှုပ်ရှားမှုတို့သည် အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ မျိုးဆက်သစ်များထံမှသာ ဖြစ်နေခြင်းသည် ခေါင်းဆောင်ပါတီဆိုသော ဂုဏ်ပုဒ်အတွက် များစွာအံ့အားသင့်စေပါ၏။
ဤနေရာတွင် အန်အယ်ဒီအနေဖြင့် ထိုသို့ဖြစ်နေခြင်းမှာ အဓိကပဲ့ကိုင်သူ ဒေါ်စုကြည်၏မူဝါဒအားနည်းမှု သည်လည်း အကြောင်းရာတစ်ရပ်ဖြစ်ချေ၏။ သူမသည် သေချာသောလမ်းကြောင်းကို ပါတီအတွက် မချမှတ်ခဲ့ပဲ သူမထံမှသာ အာဏာသက်ဆင်းမှုကိုလည်း ပြင်ဆင်ရန်မကြိုးစားခဲ့ပါချေ။ ထို့ပြင် ယခုအနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အရေးပါသည့် အလှည့်အပြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များအား သေချာတိကျသော လမ်းစဉ်မရှိပဲ ဆန့်ကျင်ရုံချမှတ်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်၏။ အထင်ရှားဆုံးပမာဆိုရလျှင် အမျိုးသားညီလာခံမှ ထွက်ခွာရန် မိမိစိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြတ်စဉ်က ထွက်ခွာပီးလျှင် မည်သည့်လမ်းစဉ်အား အကောင်အထည်ဖော်မည်၊ မည်သို့ပြုလုပ်မည်ဆိုသည့် လမ်းကြောင်းမျိုးလုံးဝမထားရှိခဲ့ပဲ တရှုးထိုးဆုံးဖြတ်ရုံ သက်သက်သာ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်ပင် ညီလာခံမှ ထွက်ခွာခဲ့သည့် အဆိုပါပါတီသည် ထိုထွက်ခွာခဲ့မှုနှင့် ထိုက်တန်သည့်၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအား အကျိုးရှိစေမည့် မည်သည့် လှုပ်ရှားမှု၊ လမ်းကြောင်းကိုမှ မပြုလုပ်နိုင်ပဲ အကျိုးမဲ့ အချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ယခုအခါတွင်လည်း သူတို့သည် မည်သည့်ဦးတည်ချက်မျှမရှိပဲ မသတ်မှတ်ပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချဖို့ အော်နေကြပြန်ပီ ဖြစ်၏။ ထိုသို့ ၀င်ပြိုင်ခြင်း မပြိုင်ခြင်း၏ နောက်ပိုင်းလမ်းစဉ်သည် အဘယ်အရာနည်း။ လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်ရှစ်နှစ်ကျော်က ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကြီးအကြောင်းလား၊ တွေ့ဆုံးဆွေးနွေးရေးလို့ ခုအော်နေသည့်အရာလား၊ မည်သည့်လမ်းစဉ်ရှိသနည်း။ ထိုသို့မေးခွန်းများအား လေ့လာမိသောကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် ထိုအရာများနှင့်ပက်သက်သည့် အကြောင်းများအား ဆက်လက်ဆွေးနွေးမှု ပြုလိုပါသည်။
Posted by MyoMyanmar at 6:15 AM0comments
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ပြုပီ.. ဟော.. Road Map တဆင့်တက်သွားပီ လို့လဲဆိုရော အသံတွေမျိုးစုံထွက်.. ဟိုလိုဝေဖန်ရတာနဲ့ ဒီလိုကြေငြာချက် ထုတ်ရတာနဲ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့တွေလည်း အရင်လို ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ပျင်းရိပျင်းတွဲမဟုတ်တော့ပဲ အလုပ်လေးဘာလေးရလို့ စည်စည်ကားကား ရှိလာတာလေးကြည့်.. ထောက်ခံပါရဲ့.. မထောက်ခံပါ အသံမျိုးစုံနားထောင်လို့ ဒီအကြောင်းလေး ရေးဖို့ဖန်လာရပါတယ်လို့ အစပျိုးချင်ပါရဲ့ခင်ဗျာ...
ကျွန်တော်ကတော့ ထောက်ခံမဲထည့်ပီးတော့ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ထောက်ခံခဲ့သမို့ အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ရာနှုန်းကြီးထဲမှာ သဲတစ်ပွင့်ခေါ်မလား အုတ်တစ်ချပ်ဖြစ်မလား ပါတော့ပါခဲ့ပါရဲ့.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလမ်းသည်သာ မြန်မာ့အရေးအတွက် တဆင့်တက်သွားစေမဲ့လို့ ယုံကြည်လို့ပါပဲ..
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ရှင်းပါတယ်.. ခုလိုအကြပ်အတည်းမှာ ကျွန်တော့နိုင်ငံကြီးရှိနေတာကို ဘယ်လိုလွတ်အောင်လုပ်နိုင်မလဲ.. ဒီနေရာမှာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲတဲ့ အတိုက်အခံပါဆိုပီး လက်မထောင်နေတဲ့ လူတွေရဲ့ အရည်အချင်းဟာ သူတို့တော်လှန်ရေးသက်တမ်း လူပျိုဖြစ်လာတာနဲ့လိုက်ပီးကို မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါရော.. ပြည်သူ့အတွက်ပါလို့ တပြားမှမလျော့အောင် အော်နေပေမဲ့လည်း ပြည်သူ့အတွက် ဆိုတာ လက်တွေ့ရော စာတွေ့မှာပါ ဘာတစ်ခုမှ ထွက်မလာတဲ့အပြင် လုံးခြာလည်ရိုက်ပီး ဘာတွေမှန်းမသိအောင် ဖြစ်နေကြတာတွေ.. အစတော့ စိတ်ပါ.. နောက်တော့ ငွေနောက်ပါပီး စီးပွားရေးသက်သက်လို လုပ်နေကြတဲ့ တော်လှန်ရေးသမားအချို့တွေ.. ဒီလူတွေကို ကြည့်ပီး ညစ်လာတာတော့ အမှန်ပဲဗျ.. လုပ်နေတာပဲလေကွာဆိုရင်လဲ အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ ဘာမှမရှိ၊ ပြည်သူကို ဘယ်နေရာမှမှ အကာကွယ်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အပြင် ကျရောက်နေတဲ့ အကျပ်အတည်းတွေကို ပိုဆိုးစေမဲ့ ဖရုံသီးတွေဖြစ်နေတာ.. ထွက်လာသမျှ အစီအစဉ်တွေ စာတမ်းတွေဟာ ဖရုံသီးမက အလေးပြားတွေပါဖြစ်လာနေလို့ ဘူးလေးရာ အလေးဆင့်လို့ စကားပုံတောင် ပြောင်းရမလိုပါပဲ..
ဒါ့အပြင် တချို့တွေကတောင် ဆိုကြသေးသဗျ.. ပြည်သူတွေမှ မပါလာပဲ.. ပြည်သူတွေ ကြောက်မနေကြပါနဲ့.. တိုက်ကြပါ ခိုက်ကြပါ.. ဆိုပီး ပြည်သူ့တောင် သူတို့မအောင်မြင်မှုကို လွှဲချချင်သေးတာ မြင်ရသေးသဗျ.. ဟုတ်ကဲ့.. အဲလိုပြောချင်သပဆိုလည်း ဘာလို့ ပြည်သူ့အတွက်လို့ နာမည်ခံချင်ကြသေးလဲခင်ဗျ.. ပြည်သူဟာ ကိုယ့်ဘာသာ အသက်စွန့်တိုက်ယူရမယ်.. တိုက်တော့လည်း ဒီနေရာမှာ အဲဒီအတိုက်အခံဆိုတာက ရှေ့ဆုံးကနေ တိုက်ပေးမှာလည်း မဟုတ်.. မင်းတို့အသက်စွန့်တိုက်ကြ ငါတော့ ပြည်သူ့အတွက် လုပ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပီး ဘာလုပ်နေမှန်းမသိ ပုံစံကတော့ ဘယ်သူ့က ဘယ်သူ့အတွက် လုပ်ရမှာပါလိမ့်လို့ ခေါင်းတောင်နောက်မိပါရဲ့.. အင်း.. ငါသေသွားရင် မင်းတို့တိုက်လို့ အောင်မြင်ချိန်မှာ ဘယ်သူက တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် နောက်ပိုင်းဦးဆောင်မလဲကွ.. ဗိုလ်ချုပ်မမြင်ဘူးလားဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးထားရှာတယ် ထင်ပါ့ အတိုက်အခံတို့ရယ်...
အဲဒီတော့ မင်းတို့ ပြည်သူတွေကြောက်လို့ဆိုရင်လဲ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပီး ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြည်သူထဲက ပြည်သူတစ်ယောက်မို့ ပြောချင်ပါ့ဗျာ.. ဟုတ်ပီ အဲလိုပြည်သူတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာ.. ဟော နှစ်ပေါင်းများစွာ ၀ါရင့်နေတဲ့ တော်လှန်ရေးသက်ရင့်ကြီးတွေ.. (ဆိုးတာက ၀ါရင့်တွေဖြစ်လာတာက မအောင်မြင်လွန်းလို့ကိုး) ဒါတွေလည်းရှိတယ်.. နောက်တစ်ခါ ဘယ်လိုတိုက်မယ်.. ဘယ်လိုလုပ်မယ်.. ဆိုတာမျိုး အားကိုးလောက်ဖွယ်စီမံချက်လည်း ဘာမှမရှိ.. ဒါတွေလည်း မြင်နေရတယ်..
ဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဗျာ.. မင်းတို့မထောက်ခံကြနဲ့.. ရတာလေးနဲ့ ကျေနပ်လိုက်ရင် ပိုဆိုးသွားမယ်.. ငါတိုက်ပေးမယ်ဆိုရအောင် ဘယ်မလဲ အဲဒီ..ငါ... နိုင်ငံခြားမှာလား.. ထောင်ထဲမှာလား.. ဒီလိုပဲ လိမ်ပိန်ပီး အဲဒီငါကို ဘယ်လောက်ထိစောင့်ရမှာလည်း.. ခပ်ရှင်းရှင်းပြောရင် အတိုက်အခံတွေမှာ လက်ရှိအစိုးရကို ထိခိုက်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် မရှိ.. နှလုံးရည်ရော.. လက်ရုံးရည်မှာပါ မယှဉ်နိုင်တာ အထင်းသားကို မြင်နေရတော့လည်း စိတ်အလေသားဗျ..
ပိုဆိုးလာတာက အဲဒီလူတွေဆီက ကိုယ့်ဘာသာ အားကိုးတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိပဲ ဟိုနိုင်ငံဝင်တိုက်ပါလား ဒီနိုင်ငံဝင်ဖဲ့ပါလားဆိုတဲ့ ကျွန်လမ်းကို ရွေးလာတာပဲ.. အဲဒီလမ်းကြောင်းဟာ ခံစားရတဲ့နိုင်ငံမှာ side effect ဘယ်လောက်ဆိုးတယ်.. မအောင်မြင်တဲ့စနစ်ဆိုတာ ကုလကော အမေရိကန်ကောလို ကျူးကျော်သူတွေတောင် လက်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ဘာသာတော့ စွန့်စားပီး ဘာမှမလုပ်ချင်ပဲ.. ၀င်ပါတော့ တိုက်ပါတော့ လုပ်နေတဲ့ အဝေးရောက်နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ တကယ့်ကို အော့နှလုံးနာစရာဗျ.. ဒီတော့ ဒီလမ်းကြောင်းဟာ ကျွန်တော်လုံးဝပယ်တယ်ဗျာ.. အင်း.. ဒါပေမဲ့ ၀င်လာလို့ကတော့လည်း ကျွန်တော်ဟာ သေနတ်ဆိုတာမကိုင်ဖူးတဲ့... တပ်မတော်သားမဟုတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ပေမဲ့ နိုင်ငံကာကွယ်ဖို့အတွက် အသက်စွန့်ဖို့တော့ နိုင်ငံသားအနေနဲ့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ထားသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စစ်တွေပီးလို့ မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီဆိုးကျိုးတွေ ကြုံရမှုကို ကိုယ်တွေ့မြင်နိုင်ဖို့ထိလည်း အသက်ရှင်လျှက် ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့လေ..
ဒီတော့ အကိုတို့ အမတို့ရာ.. မဟုတ်တရုတ် လမ်းကြောင်းကြီး တစ်ခုကို ဇွတ်မျှော်လင့်ရုံကလွဲပီး ဘာမှအရည်အချင်းမရှိတဲ့ လူတစ်စုလို့ မြင်လာတဲ့အချိန်မှာ နောက်ဘယ်နှစ်နှစ်မှန်းမသိတာကို.. အခန့်မသင့်ရင် တိုင်းပြည် သူများလက်အောက် ပြန်ကျသွားနိုင်တဲ့လမ်းကို မစောင့်ကြည့်ချင်တော့ဘူး.. သူတို့ဟာ ပြည်သူ့အတွက် တကယ်ကို လုပ်ချင်ကြသူတွေ.. ကိုယ်ကျိုးစွန့်သူတွေ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်.. ဒါပေမဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိကြပါဘူးခင်ဗျ.. အဲဒီတော့ အချိန်ကြာတာနဲ့အမျှ လမ်းကြောင်းဟာ ပြည်သူ့အတွက် သူတို့ဆိုတဲ့နေရာကနေ သူတို့အတွက် ပြည်သူပြန်ဖြစ်သွားအောင် ပြည်သူတွေဟာ အသုံးချခံတွေ.. လှိမ့်ပိန့်ခံသူတွေ ဖြစ်လာကြပါရော..
ဒီတော့ ကျွန်တော် ကိုယ့်ဘာသာ လျောက်ကြည့်တဲ့လမ်းပေါ့ဗျာ.. ဟုတ်ကဲ့ မောင်ငယ်ရင်သွေးဆိုတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ သဲတစ်ပွင့်အဖြစ် အစိုးရပြောနေတဲ့ အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံသည် စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်လာစေရန်ဆိုတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ပါဝင်ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျားးး....
အိုကေ.. အမြင်မတူတာလေးတွေ ရှိရင်လည်း ပြန်ပြောပေါ့ဗျာ..
Posted by MyoMyanmar at 7:49 AM4comments
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြီးခဲ့သည့် အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း ပုံမှန်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု တစ်ခုဖြစ်သော ဒေါ်စုကြည်၏ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် လှုပ်ရှားမှုသည် ယခု ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော သူမ၏ ၆၃ နှစ်မြောက် မွေးနေ့တွင်လည်း အစဉ်အလာမပျက် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပင် ရှိခဲ့ပါ၏။ ယခုဆောင်းပါးသည် သူမမွေးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြေငြာချက်များကို လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်တွင် သူမ၏အနေအထားတစ်ခုကိုလည်းကောင်း လေ့လာသုံးသပ်သော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါ၏။
ယခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အဖွဲ့စည်းတို့၏ ကြေငြာချက်တို့သည် ယခင်နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပုံစံများမှ အသွင်ပြောင်းလာသည်ကို ထင်ရှားစွာတွေ့ရ၏။ ယခင်ကာလများက မရဲတရဲသာဖော်ပြ ပြောဆိုရဲခဲ့သော ပြည်ပတပ်များ ၀င်ရောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်မှုကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ရဲဝံ့စွာပင် မိမိအဖွဲ့အစည်းများအား ကိုယ်စားပြုသည့် ကြေငြာချက်များတွင် ထည့်သွင်းလာကြသည်ကို ၀မ်းနည်းဖွယ်ပင် တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ဤနေရာတွင် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ရဲဝံ့စွာဟု သုံးခဲ့သည်မှာ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများ၏ အားလုံးနီးပါးသည် ပြည်ပတွင် အခြေစိုက်ကြသည့် အဖွဲ့များဖြစ်သောကြောင့် ပြည်ပရောက်စဉ်ကတည်းက အစိုးရအား ရဲဝံ့စွာတိုက်ခိုက်ဝံ့ခဲ့ကြသော အဖွဲ့များဖြစ်သည်ကို သိရှိသော်ငြားလည်း ယခင်ကာလများက မြန်မာတစ်ယောက်အနေဖြင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေဖြင့် မိမိအသိစိတ်ဖြင့် မပြောဝံ့ခဲ့သည့် စကားကို ယခု ပြောထွက်လာကြခြင်းအား ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
၁) အဖွဲ့အစည်းအား ကိုယ်စားပြုသည့် ကြေငြာချက်ဖြစ်သော်လည်း ထိုကြေငြာချက်အပေါ် အလေးထားမှုသည် မိမိအဖွဲ့၏အနေအထား၊ အဆင့်အတန်းတစ်ခု၊ ပေါ်ပေါက်လာပုံ စသည်တို့အား မိမိတို့စိတ်တွင် ကိုယ်တိုင် လက်ခံ သိရှိနေသည့်အတွက် များစွာလေးနက်မှုမရှိပဲ ပုံမှန်ဘလော့တစ်ခုမှ တစ်ကိုယ်တော်ရေးထုတ်လိုက်သော စာကဲ့သို့သာ ဖြစ်နေခြင်း။ (ထိုအဖွဲ့တို့၏ ကြေငြာချက်များသည်လည်း တကိုယ်တော်ရေးထုတ်လိုက်သော စာများ ဖြစ်နိုင်သည်ကို ၀န်ခံပါသည်)
၂) ယခင်ကာလများက ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ထုတ်ပြောရန်မ၀ံ့ခဲ့သော်လည်း နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရသော မြန်မာနိုင်ငံ၏အနေအထားသည် ထိုတိတ်တခိုး ဦးတည် မျှော်လင့်ချက်အား လူသားချင်းစာနာမှုဆိုသည့် အချက်အားအခွင့်ကောင်းယူကာ လူသိရှင်ကြား တိုက်တွန်းရန် ရုပ်ဆိုးခြင်းများစွာမရှိလှသော အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆလာကြခြင်း။ (အခြေအနေများအား လေ့လာကြည့်ပါက ထိုသူတို့မျှော်လင့်ခဲ့သည့် တကယ့်အချိန်ကောင်းအား များစွာကျော်လွန်ခဲ့ပီဖြစ်သည်ကို ထင်ရှားစွာမြင်နိုင်ပါ၏)
၃) နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံကို အတည်ပြုခဲ့ပီး Road Map ၏အနေအထားသည် စာရွက်ပေါ်မှာထက် များစွာပုံပေါ်လာသောအခါ ထိုနှေးကွေးလှသော Road Map ပါ လမ်းစဉ်များအား ပေါ့တန်စွာ ပျက်ရယ်ပြုဝေဖန်ရာမှ အလန့်တကြားသတိထားမိလာကြပြီး ထိုလမ်းကြောင်းကို ဆန့်ကျင်ရန်လမ်းကြောင်းအား ပူပန်တကြီး ထွက်ပေါက်ရှာ သကဲ့သို့ ပြုလာကြခြင်း
သို့သော် ကာယကံရှင်ပါတီဟုဆိုနိုင်သော အန်အယ်ဒီပါတီ၏ တရားဝင်ကြေငြာချက်များတွင်ပင် ထိုအချက်အား သတိကြီးစွာ ရှောင်ရှားနေချိန်တွင် အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပေါ့တန်မှု၊ အဆင်ခြင်မဲ့မှုမှာ အံ့သြဖွယ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် အန်အယ်ဒီပါတီအနေဖြင့် ထိုအချက်အား ရှောင်ရှားခြင်းမှာ အစိုးရ၏မျက်မာန်ကို စိုးရွံ့မှုကြောင့်မဟုတ်ပဲ အဆိုပါပါတီ၏ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကိုယ်တိုင်က မိမိနိုင်ငံအား တိုင်းတပါးတပ်များ ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်ရန် အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် တရားဝင် တိုက်တွန်းမှုပြုခြင်းငှာ မသင့်ဟူသော ခံယူချက်ကို လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်သေးသောကြောင့် ကျွန်တော့အနေဖြင့် များစွာပင် စိတ်သက်သာရာရမိပါ၏။
ထိုအချက်အပေါ် အခြေခံလျှက် ဒေါ်စုကြည်၏ အနေအထားအား ဆက်လက်လေ့လာလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သေချာစွာ လေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါလျှင် အတိုက်အခံများ၏ အဆိုပါစိတ်ဓါတ်ပျက်ယွင်းမှုသည် ကြောက်မယ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ပျံ့နှံ့မှုအား ကြီးမားနေခြင်း၊ အချို့သော နိုင်ငံရေးသမားများ၏ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ရသည်ကိုပင် နောင်တရသကဲ့သို့ ပြောဆိုလာကြခြင်းများသည် စိုးရိမ်ဖွယ်၊ ရှက်ရွံ့ဖွယ်အနေအထားတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနေသည်ကို ထင်းလင်းစွာပင် တွေ့မြင်ရပါ၏။ မှားယွင်းလှသော စိတ်အခြေခံ ခိုင်မာစွာဝင်ရောက်နေသော အဆိုပါအတိုက်အခံတို့၏ လှုပ်ရှားမှုတို့သည်၊ အပြောအဆိုတို့သည် အဘယ်မျှထိ ဆိုးရွားပျက်ယွင်းနေသည် ထိုသူတို့မှ ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ၊ ယုံကြည်သည့် နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ အဘယ်မျှလမ်းကြောင်းလွဲနေသည်ကို ထိုအထဲတွင် မြုပ်ဝင်နေသူများ ဖြစ်သောကြောင့် မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ် သတိထားမိရန်မလွယ်သော်လည်း၊ ဘေးလူများ အမြင်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားနိုင်ငံများ၏ အမြင်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ ပညာရှင်များ၏ အမြင်တွင်သော်လည်းကောင်း ထင်ရှားစွာပင် ပေါ်လွင်လှပါ၏။
အဆိုပါ စိတ်ဓါတ်တို့ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်း၏ တရားခံများတွင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုသည် တကယ့် အဓိကတရားခံအဖြစ် ပါဝင်လျှက်ရှိသည်၊ ယခုဖြစ်ပျက်နေသော အခြေအနေများသည် အဆိုပါစီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော့အနေဖြင့် လက်ညှိုးထိုးမည်ဆိုလျှင် သင်တို့သည် မဟုတ်ပါဟု လိပ်ပြာသန့်စွာ ဆိုရဲကြမည်လော။ အထူးသဖြင့် ဒေါ်စုကြည်သည် သူမလေ့လာချက်များကို လစ်လျူရှုကာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု၏ အကျိုးဆက်မဟုတ်ပါဟု ဆိုမည်လော။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် များစွာပင် စိတ်ဝင်စားမိပါ၏။ သူမသည် ယခုနှောင်းပိုင်းအချိန်များတွင် နိုင်ငံရေးလေ့လာမှုများအား ကျွန်တော်တို့ထက် များစွာပြုနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးတွင် ထဲထဲဝင်ဝင် ၀င်ရောက်နေသူဖြစ်ခြင်း ဆိုသော အချက်များကြောင့် ဒေါ်စုကြည်သည် ထိုပိတ်ဆို့မှု၏ ဆိုးဝါးလှသော သက်ရောက်မှုအား ကျွန်တော်တို့ထက် ပိုမိုနှံ့စပ်စွာ သိရှိမည်ဆိုသည်ကို သံသယကင်းစွာ ယုံကြည်ပါ၏။
ယခု အသက် ၆၃နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည့် အချိန်တွင် ဒေါ်စုကြည်သည် ကမ္ဘာသိ မြန်မာသိ အထင်ကရ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဘ၀သို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်မှာ ငြင်းချက်ထုတ်မရနိုင်သော အရာပင်ဖြစ်၏။ ထိုသို့ အနေအထားသို့ ရောက်ရှိရန် မမျှော်လင့်ခဲ့သည့် သူမအနေဖြင့် ဘ၀အစောပိုင်းကာလများတွင် စိတ်နောက်ကိုယ်ပါ အေးချမ်းစွာနေထိုင်ခဲ့သော်ငြားလည်း နောက်ပိုင်းအချိန်များသည်မူ အတိုက်အခိုက်များ ချုပ်နှောင်ထားမှုများအကြားတွင် ခက်ခဲစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်ကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါသည်။
သို့သော်ငြားလည်း သူမရရှိထားသည့်နေရာသည် သူမကိုယ်တိုင် လျောက်လှမ်းရရှိခဲ့သည် ဆိုခြင်းထက် ပုံသွင်းခြင်းကို ခံရကာ ထိုပုံသွင်းသော လမ်းပေါ်တွင် အလိုက်သင့် လျှောက်လှမ်းရရှိခဲ့ခြင်း၊ လျှောက်လှမ်းရင်းမှ မလျှောက်မနေရ လျှောက်လှမ်းရသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းတို့ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါ၏။ ဤကဲ့သို့ ဆိုခဲ့သောကြောင့် သူမသည် အနောက်မှပုံသွင်းသမျှ လှုပ်ရှားပေးနေရသော အနောက်လူဖြစ်ပါသည်။ ဘာသည် စသဖြင့် စွပ်စွဲလိုခြင်း လုံးဝ (လုံးဝ) မဟုတ်ကြောင်း အတန်ငယ် ရှင်းလင်းလိုပါသည်။
ရရပါစေဆိုသော ဆန္ဒလုံးဝမပါရှိခဲ့ပဲ (ဆန္ဒလုံးဝမရှိခဲ့သည်ကို ကျွန်တော်ခိုင်မာစွာယုံကြည်ပါ၏) လှုပ်ရှားရင်းမှ ရရှိလာသော များပြားလှသည့် ဆုပေါင်းစုံတို့သည်လည်းကောင်း၊ လူတကာ အားကျစေမည့် အနေအထားတစ်ခုကို လမ်းပေါင်းစုံမှ အင်အားတို့ဖြင့် ကမ္ဘာ့အလည်တွင် ဖော်ဆောင်ပေးချက်တို့သည်လည်းကောင်း သူမအား အစိုးရအား ဆန့်ကျင်ရမည့် လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် အစဉ်တစိုက် ရပ်တည်သွားစေရန် ပြန်လမ်းမရှိ ပုံဖော်ချပေးခဲ့သကဲ့သို့ ဖြစ်သွားစေပါ၏။ အစိုးရဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားခြင်းဖြင့် နိုင်ငံအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးဖြစ်ထွန်းနေမည်၊ လိုအပ်မည်ဟု သိရှိနေသော၊ ယုံကြည်နေသော အချက်များသည် သူမတွင် ရှိခဲ့မည်ဆိုလျှင်တောင် မခံနိုင်တော့လို့ လျှော့ပေးလိုက်ရပီ၊ ဆက်မတိုက်နိုင်တော့ဘူး၊ စသည့်စွပ်စွဲမှုမျိုးစုံတို့သည်လည်းကောင်း၊ အနေအထားတစ်ခုတွင် ရှိနေသည့် သူမနာမည်သည်လည်းကောင်း သူမအား အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြုရန် လျှောက်လှမ်းဖို့ ခွင့်မပြုပါတော့ချေ။
ထို့ကြောင့်ပင် အနောက်အုပ်စု၏ လိုလားချက်ဖြစ်သော တပ်မတော် အစိုးရအလုံးစုံ ပြုတ်ကျသွားရေးသည်သာ မြန်မာ့သမိုင်းကြောင်း အနေအထားကြောင့် ခက်ခဲသည်ကို သိလျှက်၊ နိုင်ငံအတွက် နစ်နာမှုများစွာဖြင့် နစ်မွန်းမည်ကို သိလျှက်နှင့်ပင်၊ သူမအနေဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်ပါ၏။ အစဉ်တစိုက် ဆန့်ကျင်ရန်လမ်းကြောင်းကိုသာ လျောက်လှမ်းရမည်ဖြစ်ပါ၏။ အဆိုပါအချက်သည် အနောက်အုပ်စု အလိုဖြစ်သော်လည်း သူတို့အလိုကို ဖြည့်ရန်လျောက်လှမ်းခြင်းဟု ကျွန်တော်မမြင်ပါ။ ထိုအရာသည် ဒေါ်စုကြည်ဆိုသည့် နာမည်အတွက်ဖြစ်၏။ ကမ္ဘာ့အလည်တွင် ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် ပုံသွင်းခံခဲ့ရသည့် သူမ၏အနေအထားအတွက် ဖြစ်၏။ အစိုးရအား ရဲရဲတောက် အစဉ်တစိုက် တော်လှန်ခဲ့သူဟူသော ပုံဖော်ခံထားရသည့် သူမဂုဏ်အင်အတွက် ဖြစ်၏။ အခြားရွေးချယ်ရန် လမ်းမရှိပါချေ။
ဒေါ်စုကြည်အနေဖြင့် တပ်မတော်အစိုးရအား အလျော့အတင်းမရှိဟု အစဉ်တစိုက်စွပ်စွဲမှုပြုခဲ့သော်ငြားလည်း မိမိဘက်မှမူ ခြွင်းချက်မရှိ တပ်မတော်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး အချက်ကိုသာ အသေဆုပ်ကိုင်ကာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု ပြုခဲ့သည့်အတွက်လည်း ဘယ်ဘက်ကမှ မလျော့သည့် များပြားလှသော ဆွေးနွေးပွဲတို့သည် အဟောသိကံ ဖြစ်ခဲ့သည်မှာလည်း အထင်အရှားရှိလှပါချေ၏။ ထိုသို့ ပုံသွင်းပေးထားသည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသာ မဖြစ်မနေဆုပ်ကိုင်ရတော့မည့် အခြေအနေတွင်ရောက်ရှိနေသော၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ကြောက်ရွံ့နေရပီဖြစ်သော သူမအား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် ကြိုးစားခဲ့သော တပ်မတော်အစိုးရအနေဖြင့်လည်း အချိန်ကုန် လူပန်း ဖြစ်ခဲ့ရသည်ကို လေ့လာနိုင်ပါ၏။
ယခု သူမအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်တိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းတွင် တပ်မတော်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်ပါရှိခဲ့လျှင်တောင်၊ ယုံကြည်လျှင်တောင် ထိုအချက်အား ရွေးချယ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါချေ။ အမှန်တကယ်လည်း ခဲယဉ်းသောအချက်ဖြစ်ချေ၏။ မိမိအနေဖြင့် နိုင်ငံတွင် လိုအပ်မှုကြောင့် ရိုးရှင်းစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်လျှင်တောင် ဒေါ်စုလဲ နောက်ဆုံးတော့လည်း သွားတာပါပဲဆိုသော အပြောမျိုးဖြင့် ရင်ဆိုင်ရမည့် လမ်းကြောင်းကို သမိုင်းဝင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှသော အနေအထားတစ်ခုအား ဆန့်ကျင်လျှက် ပြုလုပ်ရန်မှာ တော်ရုံစိတ်ဓါတ်အားဖြင့် မရနိုင်ပါချေ။ မိမိအဆင့်အတန်း ကြီးမားမြင့်မားလေလေ ထိုအဆင့်အတန်း၏ အရှိန်အဟုန်မှ လွတ်ကင်းစွာ တကယ်လိုအပ်သည် ထင်သည့်အတိုင်း လျှောက်လှမ်းရန်မှာ ခက်ခဲလေလေဖြစ်၏။ သို့သော် ပိုမိုခက်ခဲသွားစေသည်မှာ ဒေါ်စုကြည်သည် ကျွန်တော်ယခင်ဆောင်းပါးများတွင် ဆိုခဲ့ဘူးသကဲ့သို့ စိတ်ဓါတ်ယိမ်းယိုင် ပျော့ပျောင်းသူဖြစ်သောကြောင့် သူမအနေဖြင့် အထင်ကရ ထိခိုက်မှုထင်ရှားလှသည့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ဆန့်ကျင်သည့်စကား၊ အနောက်အုပ်စုအား ဆန့်ကျင်သည့်စကားများအား လေသံမျှပင် မဟ၀ံ့သည်အထိ ဖြစ်နေခြင်းပင် ဖြစ်၏။ ထိုမျှထိမူ မလိုအပ်လှဟု ထင်မိပါသည်။ အဆိုပါအချက်များသည် တိုင်းပြည်အကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေရုံမှအပ လက်ရှိအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဟုလည်း မဆိုနိုင်လောက်ပါချေ။
ယခုမူ အသက် ၆၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော ဒေါ်စုကြည်သည် ပုံဖော်ပေးထားသော လမ်းကြောင်းအတိုင်း လျောက်လှမ်းရင်းဖြင့်သာ သူမနာမည်ကိုထိန်းသိမ်းရုံမှအပ အခြားလမ်းရွေးချယ်ရန် လွန်စွာမလွယ်ကူပါတော့ချေ။
လောက၏ နှောင်ကြိုးတို့တွင် မိမိကို မြှင့်တင်ပေးသော နှောင်ကြိုးသည် သိက္ခာရှိသူတစ်ဦးအတွက် ဆန့်ကျင်ရအခက်ဆုံးဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို ကျွန်တော်မျိုးမြန်မာ လေ့လာတွေ့ရှိရပါ၏။ သို့သော် ကျွန်တော့်အနေဖြင့်မူ မိမိအမည်ထက်လည်းကောင်း၊ အဆင့်အတန်းတစ်ခုထက်လည်းကောင်း နိုင်ငံအကျိုးသည်သာ ပဓါနဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်မိပါ၏။ ထိုသို့ယုံကြည်မိသော်ငြားလည်း နိုင်ငံအကျိုးအတွက် မိမိအမည်အား စွန့်လွှတ်ကြေးဆိုလျှင်တောင် ယခုရေးသားနေသည့် ကျွန်တော်မျိုးမြန်မာပေးရမည့် အရင်းအနှီးသည် ဒေါ်စုကြည်ထက် အဆပေါင်းများစွာ နည်းပါးလှသည်ကို စဉ်းစားမိသောအခါ ....
Posted by MyoMyanmar at 6:24 AM4comments
ဒီမိုအတိုက်ခံများ၊ ဒီမိုဘလော့ဂါများ၏ ဂုဏ်ရည် (၁၃) ရပ်
ဟုတ်ကဲခင်ဗျာ.. ကျွန်တော်လေ့လာမိတဲ့ မြန်မာ့အတိုက်အခံ ဒီမိုသမားတွေ၊ ဘလော့ဂါတွေဆိုတာဟာ
၁) တဖက်က လမ်းပေါ်မှာဆန္ဒပြနေတဲ့ သံဃာတွေကို အစိုးရက ရိုက်နှက်နှိမ်နင်းလို့ သာသနာဖျက်အစိုးရဆိုပီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်စွပ်စွဲ ပုတ်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ အခြားတစ်ဖက်ကလည်း ၀ိနည်းညီသံဃာတွေ၊ မိမိတို့ သံဃာအလုပ်ကို လုပ်ပီး ခရီးသွားလာနေတဲ့ သံဃာတွေကို သမိုင်းတစ်လျောက် အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်မှုပေါင်း အတောမသတ်နိုင်အောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ ကေအန်ယူသောင်းကျန်းသူတွေနဲ့ လက်တွဲ ဆောင်ရွက်တာတွေ၊ ကျဆုံးသွားတဲ့ ကေအန်ယူခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ကိုဆို အာဇာနည်လို့တောင် ညွှန်းဖွဲ့ကြတာ တွေကို ပြုလုပ်ကြသူများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ..
၂) စစ်တပ်မှာရှိတဲ့ တစ်ခါတစ်လေတွေ့လိုက်ရတဲ့ လူငယ်ရုပ်စစ်သားလေးတွေတွေ့ရင် အတင်းဓါတ်ပုံတွေရိုက်ပီး ကလေးစစ်သားလို့ ကမ္ဘာကို ဓါတ်ပုံလေးပြပြ ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ တဖက်ကလည်း သောင်းကျန်းသူတွေရဲ့ အမည်ပေါင်းစုံနဲ့တပ်တွေမှာရှိတဲ့ ကလေးစစ်သားပေါင်းများစွာတွေကိုတော့ မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်နေသူများ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ..
၃) စစ်တပ်အနေနဲ့ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာ စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ ရွာတွေထဲမှာ အယောင်ဖျောက်နေတဲ့ သောင်းကျန်သူတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာမျိုး ရှိတဲ့အခါမျိုးမှာ ရွာသားတွေကို သတ်ဖြတ်နေပါပီလို့ အော်နေတဲ့အချိန်မှာ တဖက်ကလည်း သောင်းကျန်းသူတွေရဲ့ ရွာလုံးကျွတ်သတ်ဖြတ်တာတို့.. အလင်းဝင်ရွာတွေကို မီးရှို့တာတို့ ကို မပြောနိုင်တဲ့ ဆွံ့အသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ..
၄) မြန်မာအစိုးရက ပိုက်လိုင်းချတာတို့၊ စီမံကိန်းတို့ကြောင့် သင့်တော်ရာနေရာတွေကို ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ဖို့ စီမံပေးတာကို ရွာတွေကို အတင်းအကျပ် ရွှေ့ပြောင်းနေပါတယ်လို့ တရားစွဲမတတ်ထိကို ဖြစ်နေပြီး တဖက်ကလည်း ရှေ့တန်းမှာ လက်နက်ချမှာစိုးရိမ်တာကြောင့် အကြပ်ကိုင်ဖို့ ၇ည်ရွယ်တာရော.. နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်လို့ရအောင်ပါ.. သူတို့ သောင်းကျန်းသူ စစ်သားဆွေမျိုးသားချင်းတွေ.. ရွာသားတွေကို ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဆီ အတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်းစေမှုတွေကိုတော့ မသိနိုင်တဲ့ သူတွေ၊ ပူးပေါင်းစီမံကိန်းချ ဆောင်ရွက်သူတွေ ဖြစ်နေပြန်ပါသေးသဗျ..
၅) အစိုးရရဲ့ ပိတ်ဆို့မှုများစွာကြားက စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတဲ့ တရုတ်၊ ရုရှား၊ အာဆီယံ နိုင်ငံများနဲ့ ပုံမှန်နိုင်ငံတွေရှိရမဲ့ ဆက်ဆံမှုကို လက်ညှိုးထိုးစွပ်စွဲ ပစ်တင်နေချိန်မှာပဲ အတိုက်အခံတွေရဲ့ ပုံမှန်ထက် အများကြီးပိုတဲ့ စည်းတစ်ခုတောင်မထားတော့တဲ့ ခြေရှုပ်မှုတွေ.. သတင်းဖလှယ်တာတွေ.. လက်ဝါးရိုက်တာတွေကိုတော့ လက်ညှိုးကိုက်ပီး ကြည့်နေသူများ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ..
၆) အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေကို မကြည့်ဘူး.. ရက်စက်တယ်လို့ အော်ချိန်မှာပဲ တဖက်ကလည်း တနိုင်ငံလုံး ပြည်သူတွေကို ထိခိုက်စေမဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ဘာမှမကြည့်ပဲကို အားရ၀မ်းသာ ထောက်ခံကြိုဆိုမှုတွေ.. တိုက်တွန်းမှုတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ပြုလုပ်ကြသူများလည်း ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ခင်ဗျ..
၇) အဂတိလိုက်စားမှုတွေ အလွန်များပြားလို့ အစိုးရကို ပစ်တင်နေသူများဟာ တချိန်ထဲမှာပဲ ဒုက္ခသည်ခံချင်ရင် ဘယ်လောက်ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ နာမည်ပေါင်းစုံနဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့တွေထဲမှာ ဈေးကွက်နဲ့ကို ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ အရာတစ်ခုကိုတော့လည်း နိုင်ငံတကာမှာ မမြင်နိုင်သူများ ဖြစ်နေပါတယ်ဗျ..
၈) တဖက်မှာ အစိုးရဟာ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်ပါတယ်လို့ စွပ်စွဲနေကြပီး.. တခြားတစ်ဖက်ကလည်း နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပဲကို တကယ်အပြစ်လုပ်လို့ ပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့ ကိစ္စတွေကိုတောင် မတ၇ားဖမ်းဆီးပါတယ် ပြောလိုပြော.. အဲလိုပြစ်မှုတွေနဲ့ ပြည်ပထွက်ပြေးလာရင်တောင် ဆီးကြိုနေရာပေးခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ..
၉) မုန်တိုင်းအတွက် နိုင်ငံတကာက လှူဒါန်းပစ္စည်းတွေ ဈေးကွက်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုရောက်လဲတောင် မစုံစမ်းတော့ပဲ အစိုးရက ဖြတ်ခုတ်နေပါပီလို့ အားရ၀မ်းသာကြေငြာပစ်တင်ချိန်မှာ တဖက်ကလည်း ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပီး နိုင်ငံတကာမှာ ဒုက္ခသည်တွေဗန်းပြ လှူဒါန်းငွေတွေကို အဖွဲ့အဆင့်ဆင့်က ဘယ်ေ၇ာက်လို့ ရောက်မှန်းမသိအောင် လုပ်ခဲ့တာကိုတော့လည်း လစ်လျူရှုနိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျ..
၁၀) မြန်မာ့ပြည်တွင်းသတင်းဌာနကို သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိလို့ စွပ်စွဲချိန်မှာ ရိုင်းစိုင်းမှုမပါတဲ့ ပုံမှန်ဆွေးနွေးတဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်အမြင်တွေကိုတောင် လွတ်လပ်မှုကို အသက်တမျှ မြတ်နိုးသော အဲဒီလူတွေဟာ ဘလော့တွေမှာဆိုလဲ ဘန်းပစ်တာတွေ.. သတင်းဌာနတွေဆိုလည်း မဖော်ပြတာတွေ.. ကော်မန့်တွေ ဖျက်ပစ်တာတွေကို အစဉ်တစိုက်လုပ်ဆောင်နေတာကိုလဲ နေရာအားလုံးလိုလိုမှာ အံ့သြောစွာမြင်နိုင်သူများလဲ ဖြစ်နေပြန်ပါရောဗျ..
၁၁) အစိုးရကို ရိုးသားမှုမရှိပါဘူးလို့ ပြောနေချိန်မှာ တဖက်ကလည်း မမှန်မှန်းသိတဲ့ သတင်းတွေကိုတောင်တင်.. အဲဒါတွေကိုးကားပီး ဝေဖန်.. လုပ်ကြံအင်တာဗျူးတွေလွှင့်.. စတာတွေကိုလဲ မရိုးမသား လုပ်နေကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ..
၁၂) ကယ်ဆယ်ရေးကို အပြင်းအထန်ကြီး လုပ်နေတဲ့ အစိုးရကို ဒုက္ခသည်ပြည်သူတွေကို အာရုံမစိုက်ဘူး.. နိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးကိုပဲ ကြည့်နေတယ်.. ဒုက္ခသည်တွေကြားမှာ အသေအပျောက်တွေ များလာမှာစိုးတယ်လို့ တဖက်ကအသေအကြေ စွပ်စွဲချိန်မှာ တဖက်ကလည်း အမေရိကန်အစရှိတဲ့ သင်္ဘောတွေ အဆင်ပြေပြေမဟုတ်ပဲကို စစ်ရေးအရ၀င်အောင် နိုင်ငံရေးတိုက်ကွက်ဆင် လှုံဆော်ပီး ဒုက္ခသည်တွေ အားလုံးအပြင် တနိုင်ငံလုံး ပြည်သူတွေကိုပါ စစ်ဒုက္ခထဲဆွဲသွင်းဖို့ စိတ်ပါလက်ပါ ကြံစည်ရက်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ..
၁၃) နောက်ဆုံးအဓိကဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်စွာသဘောထား ကွဲလွဲခွင့်ကိုတောင် နားမလည်ပဲ ငါပြောသလိုမပြောရင် ငါ့ရန်သူပဲမြင်ရုံတင်မက သတ်မယ်ဖြတ်မယ် ကျိန်းဝါးတဲ့အထိ အာဏာရှင်ဆန်လွန်းလှတာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ..
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ.. ဒီလိုမြင်ပီးသကာလမှ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြောချင်တာတော့ ငါဘာလဲ.. သူဘာလဲ.. ငါဘာကောင်းလဲ.. သူဘာကောင်းလဲ.. ငါဘယ်လောက်ရိုးသားလဲ.. သူဘယ်လောက်ရိုးသားလဲ.. အကိုတွေ အမတွေ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်.. ဒီ အတိုက်အခံဒီမိုတွေ၊ ဘလော့ဂါတွေရဲ့ ဂုဏ်ရည် ၁၃ ရပ်ဟာ တကယ်ဟုတ်နေလား မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာလဲ ကိုယ့်ဘာသာစဉ်းစားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ..
Posted by MyoMyanmar at 5:57 AM2comments
နာဂစ်ဟုအမည်တွင်သော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် မေလ (၂)ရက်နေ့မှစတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့သမိုင်းတွင် အဆိုးဝါးဆုံးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုအား ရက်စက်စွာ ပေါ်ပေါက်စေခဲ့ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် များပြားလှသည့် အပြီးမသတ်နိုင်သေးသော လူအသေအပျောက်စာရင်းများ၊ ပျောက်ဆုံးစာရင်းများ၊ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုစာရင်းများ၊ ကိန်းဂဏန်းများ၊ ရုပ်ပုံများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ လူများ၏စိတ်နှလုံးကို ညှိုးချုံးစေခဲ့ပြီး မြန်မာလူမျိုးများအဖို့မူ ဆိုဖွယ်မရှိအောင်ပင် ထိခိုက်ခံစားကြရပါ၏။
ဤဆိုးဝါးလှသော အဖြစ်ကြီး၏ အဓိကတာဝန်ရှိသူအဖြစ် ကျွန်တော်သည် လက်ရှိတပ်မတော်အစိုးရအား ပြင်းထန်စွာစွပ်စွဲ ပြစ်တင်လိုက်ပါသည်။
အစိုးရသည် ပုံမှန်အသိပေးမှုမျိုးကိုသာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မည်သည့်ကာကွယ်မှုမျိုးကိုမျှ ထိထိရောက်ရောက် မပြုလုပ်ခဲ့ပါချေ။ အကယ်၍ အစိုးရအနေဖြင့် ကာကွယ်မှုများ သတိပေးမှုများ ပြုခဲ့သည်ဆိုလျှင်တောင်မှ ဤမျှပြင်းထန်သော သဘာဝအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိနိုင်၊ အသေအပျောက်စာရင်းများ ယခုကဲ့သို့ပင်များပြားစွာ ရှိနေဦးမည်မှာ သေချာသော်လည်း ငါတို့တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ခဲ့တာပဲဟု ဖြေသိမ့်နိုင်ပါဦးမည်။ (မုန်တိုင်း၏ပြင်းထန်မှုသည် ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်တောင် ထိုအရာများအား ချိုးဖျက်ဝါးမျိုနိုင်စွမ်းအားတွေ့ရှိခြင်း၊ ရွာများအား ရွှေ့စေသည့်အထိကာကွယ်မှုမျိုးကိုမူ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်သည်မှာ သေချာခြင်း၊ ထိုသို့ပြုလျှင်တောင် ရွာခံများ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများက လက်ခံကြမည်မဟုတ်ခြင်းတို့ကြောင့် ကာကွယ်မှုပြုခြင်းသည်လည်း များစွာထိရောက်မည်မဟုတ်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။) ယခုမူ အပြစ်မဲ့စွာသေဆုံးသွားကြသည့် လူထောင်သောင်းတို့အတွက် တပ်မတော်အစိုးရ၏ တာဝန်ကျေပွန်မှုသည် လက်လွတ်စံပယ် နိုင်လွန်းလှချေသည်ဟု ခံစားယုံကြည်မိပါ၏။ ၀မ်းနည်းဖွယ်အတိ ကောင်းချေ၏။
ဤနေရာတွင် ၀န်ခံရန်တစ်ခုရှိပါ၏။ မုန်တိုင်းသည် တစ်နာရီကို မိုင်တစ်ရာကျော်နှုန်းဖြင့် ပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်နေပြီး 36နာရီအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်မည်ဟု အစိုးရသတင်းစာမှ မေ (၁) ရက်တွင် ကြော်ငြာခဲ့စဉ်က ကျွန်တော့်အနေဖြင့် အန္တရာယ် ကိစ္စတစ်ခုဟုပင် သဘောမထားပဲ မိမိ၏မိသားစုကိုပင် သတိပေးခြင်း၊ မပြုခဲ့ပါချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအရာအား တစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ် မကြုံဘူးပဲ ကြောက်စရာဟုလည်းမထင်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သာမန်ကိစ္စတစ်ခုဟုသာ မှတ်ယူခဲ့ပီး ထိုသတင်းအားဖတ်ရှုပီး နာရီအနည်းငယ်အတွင်း မေ့ပျောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်ကဲ့သို့ပင်အလားတူစွာ ယခုပြင်းထန်စွာ စွပ်စွဲပြစ်တင်နေသော မည်သည့် အသံလွှင့်ဌာန၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကမျှလည်း ထိုမုန်တိုင်းကြီးလာနေပါပြီ။ အပျက်အစီးများလိမ့်မယ်။ အားလုံးပြင်ကြ။ ဆင်ကြ။ ရွှေ့ကြ၊ ပြုကြဟု အရေးတယူ သတိပေးခြင်းမပြုကြပဲ.. သာမာန်ကိစ္စတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူခဲ့ကြသည်၊ အစိုးရသတင်းဌာနများကဲ့သိုိ့ပင် သာမာန်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်ကိုလည်း ထင်ရှားစွာပင် တွေ့ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် နေရာပြည့်စွပ်စွဲပစ်တင်နေကြသည့် ထိုနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ထိုကြိုသိခဲ့ပါသည်ဆိုသည့် 48 နာရီအတွင်း အစိုးရ၏ ပေါ့ဆစွာနေမှုကို သူတို့ကလည်း 48 နာရီလုံးလုံး အရေးတယူတစ်ခွန်းမျှပင် မပြောခဲ့ပဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ကြ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည်လည်း ထိုအရာအား တစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ် မကြုံဘူးပဲ ကြောက်စရာဟုလည်းမထင်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်၏။
လက်ရှိတပ်မတော်အစိုးရ၏ စီမံခန့်ခွဲသော လူများသည်လည်းကောင်း၊ ၀န်ထမ်းများသည်လည်းကောင်း။ တာဝန်ရှိလှသော မိုးလေ၀သဌာနသည်လည်းကောင်း ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ပင် ယူဆခဲ့ကြမည်ဆိုသည်ကို ကျွန်တော်လေ့လာမိပါသည်။ သို့သော် ရှင်းလင်းစွာသိထားရမည်မှာ အစိုးရသည် အစိုးရဖြစ်၏။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအား စီမံအုပ်ချုပ်နေသော အဖွဲ့ဖြစ်၏၊ မကြုံဖူးလို့ မသိဘူးလို့ပါဟူသော စကားမျှဖြင့်လည်းကောင်း၊ ငါပြောခဲ့တာပဲ မတွေ့ဘူးလားဟူသော စကားမျှဖြင့်လည်းကောင်း၊ ထန်းလျှက်ကာ၍မရပါချေ။ ဘယ်သူကရော သိလို့လဲဟူ၍လည်း ဆိုမရပါချေ။ နိုင်ငံအား အုပ်ချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် အခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများအားလည်း လက်ညှိုးထိုး၍မရပါချေ။ မိုင်တစ်ရာကျော်နှုန်းဖြင့် တိုက်ခတ်သောမုန်တိုင်းသည် မည်မျှထိခိုက်နိုင်သည်။ ပျက်စီးမှုအား မည်မျှကြီးနိုင်သည်၊ မည်သို့တုန့်ပြန်ရမည် စသည်ဖြင့် ပြင်ဆင်မှုမျိုးများ လုံးလုံးမတွေ့ရခြင်းကြောင့် ကျွန်တော့်အနေဖြင့် အစိုးရကိုသော်လည်းကောင်း၊ မိုးလေ၀သဌာန၏ အရည်အချင်းကိုသော်လည်းကောင်း များစွာပင်သံသယဖြစ်မိပါ၏။ နိုင်ငံအား စနစ်တကျစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်း အရည်အချင်းကိုလည်း ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်မည်ဟုထင်မိပါသည်။
(မှတ်ချက်။ ။ ဤနေရာတွင် အန်အယ်ဒီပါတီသည်လည်း နိုင်ငံအုပ်ချုပ်နိုင်သူများဖြစ်သောကြောင့်၊ အုပ်ချုပ်ရန်ကြိုးစားနေသူများ ဖြစ်သောကြောင့် ထိုသို့သော အမြင်မျိုးရှိခဲ့သင့်သည်၊ ပြည်သူအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သတိပေးခဲ့ခြင်း၊ တပ်မတော်အစိုးရမှ ပေါ့လျော့နေမှုကို ထောက်ပြခြင်းများ ပြုခဲ့သင့်သည်ဟု ဆိုလိုသူများ ရှိနိုင်ပါ၏။ ကျွန်တော့်မျိုးမြန်မာသည်မူ ထိုသူတို့၏ အရည်အချင်းကို မယုံကြည်သောကြောင့် ထိုသူများထံမှ ထိုသို့သောသတိပေးချက်များ ထွက်မလာခြင်းကို အံ့သြောတကြီး ထောက်ပြ ပြစ်တင်နေမည်မဟုတ်ပဲ တပ်မတော်အစိုးရအားသာ စွပ်စွဲပြစ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
ထို့ကြောင့် ယခုအဖြစ်ကြီး၏ အဓိကတာဝန်ရှိသူအဖြစ် လက်ရှိတပ်မတော်အစိုးရအား ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ပြင်းထန်စွာစွပ်စွဲပြစ်တင်လိုက်ပါသည်။
ယခု ထိုဆိုးဝါးလှသော အဖြစ်ဆိုးကြီး၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကာလသို့ရောက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအရေးကြီးသည့် အသက်ရှင်ကျန်နေနိုင်သည့် ဒုက္ခသည်များအား ရှာဖွေကယ်တင်ခြင်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရရှိထားသူများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ကာ အဆုံးအပါးမရှိအောင် စောင့်ရှောက်ခြင်းဟူသော ကိစ္စတို့သည် တိကျလျှင်မြန်စွာမလုပ်နိုင်လျှင် မိနစ်တိုင်းသည် လူတို့၏အသက်ဖြစ်နိုင်ပါ၏။ ထို့ကြောင့် လူများကယ်တင်ရေးကိစ္စများ၊ ထိုကယ်တင်ထားသူများ၊ ဒုက္ခသည်များ၏ နေရာချထားရေးများ၊ စားနပ်ရိက္ခာကိစ္စများ၊ သောက်သုံးရေရရှိရေး၊ လျှပ်စစ်မီး အစရှိသဖြင့် အတောမသတ်နိုင်သောအရေးများအား အချိန်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိ အမြန်ဆုံးပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နေသည်ဆိုသည်မှာ သံသယဖြစ်မဖွယ်မရှိပါချေ။
ထိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ခံရသော ဒေသများ၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ခက်ခဲပုံမှာ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် လိုက်မမီနိုင်အောင်ပင် ဖြစ်ချေသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပိုဆိုးသည်မှာ ထိုသို့ရှုပ်ထွေးနေသည့်ကြားမှ နိုင်ငံရေးခြေရှုပ်မှုများ ဖြစ်လာနိုင်ခြင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံကြီးအချို့၏ စောင့်ကြည့်ခြင်းခံရသည့် နိုင်ငံဖြစ်သောကြောင့် သဘောရိုးဆန်သည့် အကူအညီများအပြင်၊ သဘောမရိုးသည့် အကူအညီများလည်း ပါလာနိုင်ခြင်း၊ မိမိအကျပ်တည်းကို အခွင့်ကောင်းယူကာ စွပ်ဖက်မှုများ ဖြစ်လာနိုင်ခြင်း စသော ရှုပ်ထွေးလှသည့် အရေးတစ်ခုကိုသာ ကွက်ကွက်လေးကြည့်မရသည့် မမြင်သာနိုင်သော အခြေအနေများသည်လည်း ပေါ်ပေါက်နေသည်မှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ကျွန်တော့်အဖို့မူ အခြားကျယ်ပြန့်သောကိစ္စများအား မဆင်ခြင်ပဲ ပြုလုပ်သည်ဆိုဆို၊ အခြားခြားသော နိုင်ငံ့အရေးများလည်း ရှိနေသေးသည်ဟုပြောပြော ထိုအချက်များအား ယုံကြည်လက်ခံထားသော်ငြားလည်း ယခုချိန်တွင်မူ လူများအား အရေးတကြီးကယ်တင်လိုသည်မှာ ပြင်းပြသောဆန္ဒပင်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်ပင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ စစ်သင်္ဘောကြီးများဖြင့်၊ စစ်လေယာဉ်ကြီးများဖြင့် ၀င်ရောက်ကယ်တင်မှု ပြုလိုပါသည်ဆိုသည့် ကမ်းလှမ်းချက်သည် သဘောရိုးသည်ဖြစ်စေ၊ ဆန်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆန္ဒစောစွာပင် လက်ခံမှုပြုလိုလှပါ၏။ အဆိုပါနိုင်ငံမှ ကမ်းလှမ်းသော ကူညီမှုသည် အခြားနိုင်ငံများထက် ထူးပီးများနေခြင်းမရှိသော်ငြားလဲ တပြားရရ၊ တစ်ယောက်ပိုရှင်ရှင် လက်ခံလိုသည်မှာလည်း ပြင်းပြသောဆန္ဒဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် တပ်မတော်အစိုးရ၏ ထိုအကူအညီအပေါ် များစွာစဉ်းစားနေခြင်းအပေါ် နားမလည်နိုင်ဖြစ်ရပါ၏။ ထို့အတူ အခြားနိုင်ငံများမှ ဘာမှပြောမနေပဲ လေယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများ တစ်စီးပီး တစ်စီးဆိုက်ရောက်ကူညီနေသည့် အချိန်မှာပင် လူသားချင်းစာနာကယ်တင်လိုလှပါသည်ဟု တဖွဖွအော်ကာ မိမိမှအကူညီပေးလိုသော်လည်း တပ်မတော်မှလက်မခံခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင် ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွင် နိုင်ငံရေးအမြတ်သာထုတ်နေပီး တခြားတစ်ဖက်မှမူ မိမိတပ်များမ၀င်ရသရွေ့ အကူညီမပေးပဲ ထားထားသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ စိတ်သဘောထားကိုလည်း နားမလည်နိုင်ဖြစ်ရပါ၏။ ပြည်တွင်းမှ မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကာ ကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်တွေလည်း တတ်နိုင်သမျှ သူတို့မြို့တွေမှာ လုပ်နေကြပါတယ်ဟု ဘာမှမခိုင်လုံသည့်စကားမျှသာ ပြောဆိုပီး မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမျှမရှိပဲ ဘာကိုစောင့်နေမှန်းမသိ စောင့်နေသည်မှာ သေချာလှသော အန်အယ်ဒီပါတီအားလည်း နားမလည်နိုင်ဖြစ်ရပါ၏။ တပ်မတော်အစိုးရ၏ ပြည်တွင်းအားကိုသာအသုံးချရန် အားသန်လွန်းကာ အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် အကူညီများအား လက်ခံရန်လက်တွန့်နေမှုကိုလည်းကောင်း၊ လူများအားကယ်တင်ရန် အဓိကဖြစ်ပါသည်ဟု ကြွေးကြော်နေသော အဆိုပါနိုင်ငံများ၏ လှုပ်ရှားမှုများသည်လည်းကောင်း၊ အာဏာတည်မြဲရေးနှင့် နိုင်ငံရေးကိုသာ အဓိကထားပီး လူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ လစ်လျူရှုသည်ဟု စွပ်စွဲနေသည့် အဆိုပါအန်အယ်ဒီပါတီ၏ ယခုအချိန် နိုင်ငံရေးတိုက်ကွက် လှုပ်ရှားမှုသည်လည်းကောင်း၊ ကျွန်တော့်အား များစွာစိတ်ပျက်မိစေပါသည်။
အချုပ်ဆိုရလျှင် တပ်မတော်အစိုးရအနေဖြင့် ပြင်းထန်လှသော အဖြစ်ဆိုးကြီး၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအရှုပ်အရှင်းများ၊ ယခုအဖြစ်ကိုသာ ကွက်ကွက်ကြည့်မရပဲ ရှိနေသေးသည့် နိုင်ငံ့အရေးကိစ္စများ၊ ထိုအရေးများနှင့် ယှဉ်ကာလုပ်ဆောင်လျှင် ထိခိုက်နိုင်သည့် ယခုအရေးများစသဖြင့် ရှုပ်ထွေးလွန်းလှသည့်အပြင် ခက်ခဲသော crisis management အား အကောင်းဆုံးကိုင်တွယ် လုပ်ဆောင်ကာ ပြည်သူလူထုအား ပုံမှန်အနေအထားသို့ ရောက်ရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပြီး မိမိ၏ ရုပ်ဆိုးလှသော တာဝန်ပျက်ကွက်ခဲ့မှုကို တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်နိုင်မည်ဟု ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ယုံကြည် မျှော်လင့်မိပါသည်။
Posted by MyoMyanmar at 10:38 PM2comments
နာဂစ်ဟုအမည်တွင်သော ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုတိုက်ခတ်မှု၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် အပျက်အစီး များပြားမှု၊ သေဆုံးခဲ့ရသော ကျွန်တော့်သွေးချင်း မြန်မာတို့၏ အရေအတွက်သည် ထောင်ဂဏန်းကျော်ထိရောက်လာကာ သောင်းဂဏန်းထိပင်ရှိနိုင်ကြောင်း ကြားသိရသောအခါ များစွာပင်တုန်လှုပ်ဝမ်းနည်းမိပါသည်။ ထိုသို့သော ကြမ္မာဆိုးကျရောက်မည်ဟု အတွေးမျှပင်မရှိဘူးသော အဖြစ်ကို ကျွန်တော့်၏နိုင်ငံသားများ ရုတ်တရက်ရင်ဆိုင်ရသည့်အတွက် ကျွန်တော်မျိုးမြန်မာသည် ဆောက်တည်ရာမဲ့ ကြေကွဲမှုကို ခံစားမိပါ၏။ သဘာဝတရားသည် ရက်စက်လွန်းလှပါ၏။ လွန်စွာ ၀မ်းနည်းဖွယ် ကောင်းချေသည်။ ထိုအချိန်တွင် မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ ရှိမနေပဲ ပြည်ပရောက်နေသည့်အဖြစ်အားလည်း လိပ်ပြာမလုံခံစားမိပါသည်။
ယခုခံစားမှုကို မည်သူ့ကိုမျှတိုင်တည်လိုခြင်း၊ ဖွင့်ဟလိုခြင်းမဟုတ်ပဲ ဤဆိုးဝါးလှသော ရင်နာဖွယ်အဖြစ်အား မိမိနေရာလေးတွင် ဖွင့်ဟမှတ်တမ်းတင်ရေးသားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by MyoMyanmar at 6:56 AM0comments
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ပြည်သူ၏ထောက်ခံမှု ရယူကာ အတည်ပြုပြီး တပ်မတော်အစုိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှ မြန်မာနုိုင်ငံအား အရပ်သားအစုိုးရလက်သုို့ ၂၀၁၀ နောက်ဆုံးထားကာ လွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ (၉ ) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အစုိုးရ၏ ထင်မှတ်မထားသော ကြေငြာချက်နှင့်အတူ မြန်မာ့နုိုင်ငံရေးလောကသည် အသံမျိုးစုံ အမြင်မျိုးစုံတုို့ဖြင့် ဆူညံနေခဲ့၏။ အတုိုက်အခံ နုိုင်ငံရေးအုပ်စုများမှလည်း ရှုထောင့်မျိုးစုံမှ ဝေဖန်ချက်မျိုးစုံဖြင့် ကန့်ကွက်မှုများကုို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်မှာ အချိန်နီးကပ်လေလေ အရှိန်မြင့်လေလေပင်ဖြစ်သည်။ မြင်သာထင်သာမရှိသော်လည်း ထုိုအခြေအနေအား ပျက်ပြားအောင် ပြုလုပ်မည့် လှုပ်ရှားမှုများ၊ အစီစဉ်များသည်လည်း ရှိကောင်းရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးသည် အချို့ချို့သော မသမာသည့် နုိုင်ငံရေးလုပ်စားသူများ၊ အာဏာရယူလုိုသူများအား အသာထားကာ နုိုင်ငံအတွက် မိမိမှန်ကန်သည်ဟု ယုံကြည်၍ စိတ်ဓါတ်ခုိုင်မြဲစွာ ကန့်ကွက်လုိုသူများ၊ ဒီမုိုကရေစီလှုပ်ရှားသူများ၊ နုိုင်ငံရေးသမားများအား အဆုိုပါသူတုို့၏ ရပ်တည်ချက်နှင့် နုိုင်ငံအရေး စပ်ဆက်ကာ မေးခွန်းထုတ်လုိုခြင်း ဖြစ်၏။
ကျွန်တော်သည် ဒီမုိုကရေစီစနစ်တွင် ဆန္ဒပြင်းစွာ နစ်မြုပ်ပျော်ဝင်သူတစ်ဦး မဟုတ်သည်ကုို ဦးစွာဝန်ခံလုိုပါသည်။ မည်သည့်စနစ်ထက်မဆုို နုိုင်ငံသားတုို့၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ကြိုးစားမှုအားသည်သာလျှင် နုိုင်ငံတော်တုိုးတက်ရေးတွင် ပဓါနကျသည်ဆုိုသည်အား ခုိုင်မာစွာ ယုံကြည်သောကြောင့်လည်း ဖြစ်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆုိုသော် အချင်းချင်း မညီညွတ်သောကြောင့် ပျက်ယွင်းနေရသည့် ဒီမုိုကရေစီနုိုင်ငံများအား လည်းကောင်း၊ စည်းလုံးမှုကြောင့် တုိုးတက်နေသည့် အခြားနုိုင်ငံရေးစနစ်များကျင့်သုံးသော နုိုင်ငံများအား လည်းကောင်း ကမ္ဘာတွင် အထင်ကရပင် မြင်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒီမုိုကရေစီစနစ်သည် ထုိုသုို့စည်းလုံးမှုအားဖြင့် တုိုးတက်လာမည့်နုိုင်ငံတော်အား ပုိုမုိုပွင့်လင်းသော၊ အရှိန်မြှင့်တင်ပေးနုိုင်သည့် အကောင်းဆုံးစံစနစ်တစ်ခုအဖြစ်မူ အသိအမှတ်ပြုပါ၏။
ဦးစွာဆိုရလျှင် ယခု နုိုင်ငံရေးဆွေးနွေးသူ အများစုသည် လက်ရှိအစုိုးရ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ဆန့်ကျင်ရန် စည်းရုံးခြင်း၊ ဆန့်ကျင်မည်ဟု စိတ်ဝယ်စွဲမြဲစွာ ခံယူထားခြင်းများ ရှိကြသော်ငြားလည်း ထုိုနည်းလမ်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား ငြင်းပယ်မည်ဆုိုလျှင် အခြားမည်သည့်နည်းလမ်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ဆုိုသည်ကုို ချပြနုိုင်သူများ၊ အမြင်များအား မည်သည့်၊ မည်သည့်နေရာတွင်မျှ မတွေ့ရပါချေ။ လက်ရှိအစုိုးရသည်ပင်လျှင် ကန့်ကွက်သံများ ပွက်လောရုိုက်နေသည့် ကြားမှ အကယ်၍များ အတည်မဖြစ်ခဲ့လျှင် မည်သုို့ ဆက်လက်ပြုလုပ်ပါမည်ဟု ပြောနုိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆုိုသော် ထွက်ပေါက်မရှိသောကြောင့် ဖြစ်၏။
မြန်မာ့နုိုင်ငံရေးကုို ဦးဆောင်နေသည့် ပါတီနှင့် လက်ရှိတပ်မတော်အစုိုးရတုို့ အကြားရှိ စေ့စပ်မရသော အမြင်သည် နုိုင်ငံသား အချင်းချင်းဖြစ်ပါလျက်နှင့်ကုို ကြီးထွားလွန်းလှသည်ဟု ကျွန်တော်မြင်၏။ ဤနေရာတွင် သင်တုို့သည် လက်ရှိအစုိုးရမှ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကုို ခေါင်းမာစွာငြင်းပယ်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆုိုလျှင် လက်ရှိအစုိုးရမှ အမြဲတစေပြောဆုိုခဲ့သည့် ဆွေးနွေးရန်ကမ်းလှမ်းချက်များအား အတိုက်အခံများမှ ငြင်းပယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ချေသည်ဆိုသည်အတွက်လည်း အကြောင်းပြချက်ရှိနေရမည်ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးဖက်အဖွဲ့နှစ်ခုလုံးအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အသာစီးရမှုကို မလျော့လိုစတမ်း အသေဆုပ်ကိုင်ကာ နိုင်ငံအရေး လစ်လျူရှုကာ မိမိအရေးကိုသာ ရှေ့တန်းတင်သည့် ဆွေးနွေးချက်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက် မအောင်မြင်နိုင်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပေသည်ဟု စွပ်စွဲမှုပြုလိုပါ၏။
လေ့လာကြည့်မည်ဆိုလျှင် အကယ်၍များကျွန်တော်တို့သည် လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအား လက်ခံမည်ဆိုလျှင် မည်သည့်ရလဒ်များ ပေါ်ထွက်လာမည်နည်း။..
၁) 2010 ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်အတည်ဖြစ်ကာ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အန်အယ်ဒီအနိုင်ရခဲ့သည့် ရလဒ်သည် တရားဝင်ပယ်ဖျက်ပြီးသား ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်၏။
၂) မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂါတ်နိုင်ငံရေးတွင် တပ်မတော်အနေဖြင့် (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ပါဝင်ရန် ပြည်သူမှ တရားဝင်အတည်ပြုသကဲ့သို့ ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
၃) အစိုးရသစ်အနေဖြင့် တကယ့်အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် တပ်မတော်မှစွက်ဖက်မှုကင်းလွတ်စွာ ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲမည်ဖြစ်၏။
--အခြားအချက်များစွာရှိပါသေး၏။ blog များစွာတွင် အကျယ်တ၀င့် ဆွေးနွေးမှုများအား ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်
ထိုသို့သော အချက်များကို လက်မခံနိုင်သောကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံအား ပယ်ဖျက်မည်ဆိုလျှင် အဘယ်သို့သော ရလဒ်များထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါသနည်း..
၁) အနည်းဆုံး လက်ရှိတပ်မတော်အစိုးရသည် ကာလမသိနိုင်သော အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ဆက်လက်အုပ်ချုပ်နေမည်ဖြစ်သည်။
၂) ထိုသို့ အုပ်ချုပ်နေမှုအား အဆုံးသပ်ရန် နောက်ထပ်အခြေအနေအရပ်ရပ်တိုိ့၏ ဖိအားဖြင့် ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းသို့ တက်ရောက်လာသည်အထိ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြည်သူသည် ပိုမိုကျပ်တည်းသော အနေအထားသို့ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ၀ိုင်းဝန်းတွန်းပို့ခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်သည်။
၃) အကယ်၍ လူထုသည် အုံကြွမှုရှိမလာပဲ တအုံနွေးနွေးဖြင့် ဆက်သွားနေပါက မြန်မာနိုင်ငံသည် ဖိအားပေါင်းစုံ၏ အောက်တွင် ပိုမိုအခြေအနေနိမ့်ကျ ကာ နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ ပျက်ယွင်းဖွယ်ရှိ၏။
၄) အတိုက်ခံများ မျှော်မှန်းထားသကဲ့သို့ ပြည်သူသည် အဆုံးစွန်ထိ ပိတ်ဆို့မှုများအား မခံရပ်နိုင်ဖြစ်ကာ အကယ်၍လူထုအုံကြွမှုကြီးဖြစ်မည်ဆိုပါလျှင် သတိထားရန်မှာ သင်တို့သည် ပြည်သူအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ စနစ်အကျဆုံး၊ အင်အားအတောင့်တင်းဆုံး အဖွဲ့စည်းကြီးတစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်ခိုင်းနေခြင်း ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုပင် ဖြစ်၏။
ထိုအချက် အမှတ် (၄)သည် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါလျှင် စဉ်းစားရန်မှာ..
ထိုအုံကြွမှုသည် လွန်စွာကြီးမားမည်ဖြစ်သည်မှာ တွေးကြည့်ရန်ပင် လိုမည်မဟုတ်ပါချေ။ ရှင်းလင်းစွာ ပြောရလျှင် နိုင်ငံတော်၏ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအတွက် ဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုပင် ပယ်ဖျက်ကာ မင်းမဲ့စရိုက်လွှမ်းမိုးသည့် အုံကြွမှုမျိုး ဖြစ်လာမည်မှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ်၏။
- ထိုသို့သော ပရမ်းပတာမင်းမဲ့ကာလအား ထိန်းသိမ်းရန်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် မည်သူ့အားယုံကြည်ကိုးစား အပ်နှင်းနိုင်ပါသနည်း။
- အကယ်၍များ ထိုအချက်အားအခွင့်ကောင်းယူကာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူများမှ ခွဲထွက်ခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်လာမည်ဆိုလျှင် မည်သို့ပြုလုပ်ကြပါမည်နည်း။
ဤနေရာတွင် ဒေါ်စုကြည်သည် ထိုသို့ပရမ်းပတာဖြစ်မှုများကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းတည့်မတ်ရန် အကောင်းဆုံးပြယုဂ်အဖြစ် ကျွန်တော့်အနေဖြင့်မြင်ထားသော်လည်း ထိုနည်းလမ်းသည် သူမအပေါ်ပုံအပ်ကာ နိုင်ငံအနာဂါတ်အား လောင်းကြေးထပ်ရသကဲ့သို့ ဖြစ်စေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူမ၏နောက်လိုက်အဖြစ်နေရန်နှင့် ခွဲထွက်ခွင့်ရယူကာ အကြီးအကဲတစ်ယောက်ပြုရန်ဆိုသည့် အခြေနေနှစ်ခုအပေါ်တွင် အာဏာရယူလိုမှုကို လွန်စွာတပ်မက်သည့် အဆိုပါ သောင်းကျန်းသူခေါင်းဆောင်များ၏ အနေအထားအား မည်သူမျှအာမမခံနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ချေ၏။ ထို့ပြင် ထိုအချိန်သည် နိုင်ငံတွင်းအခြေအနေမှာလည်း လွန်စွာရှုပ်ထွေးပရမ်းပတာ ဖြစ်နေမည်မှာ အသေချာဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ လွန်စွာအန္တရာယ်ကြီးလှပါ၏။ သာမာန်အရေးမဟုတ်ပါချေ။ အကယ်၍များ တိုင်းပြည်သည် ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်လျှင် နိုင်ငံပြိုကွဲနိုင်သည်အထိပင် အန္တရာယ်ကြီးလှချေ၏။
ထိုသို့ထိုသို့ သုံးသပ်မိသောအခါ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံအား ဆန့်ကျင်ရန်နှိုးဆော်နေသူများ၊ လှုပ်ရှားနေသူများ၊ စိတ်ဓါတ်ခိုိင်မြဲစွာ ချထားသူများအား မေးခွန်းထုတ်လိုပါ၏။
(ဤဆောင်းပါးအစပိုင်းတွင် ကျွန်တော့်အနေဖြင့် နုိုင်ငံရေးလုပ်စားသူများ၊ အာဏာရယူလုိုသူများအား အသာထားကာဟုဆိုထားသည့်အတွက် ထိုသူများအား မေးခွန်းထုတ်ခြင်းမဟုတ်ပါချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူများအနေဖြင့် ယခုအနေအထားပေါ်မူတည်ကာ မိမိရပိုင်ခွင့်သည်လည်းကောင်း။ အခွင့်အရေးသည်လည်းကောင်း တိုးတက်နိုင်ခြင်း၊ ဆုတ်ယုတ်နိုင်ခြင်း၊ တည်မြဲနိုင်ခြင်း၊ ပျက်ပြားနိုင်ခြင်းမျိုးများရှိနေသည့်အတွက် အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အမြင်သည် ဆန္ဒစွဲကင်းသောအမြင်မျိုးဖြစ်ပါသည်ဟု ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ယုံကြည်မပေးနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ချေ၏။)
သင်တို့အနေဖြင့် ထိုဆန့်ကျင်မှုကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့် အခြေအနေများအား သေချာစွာစဉ်းစားထားပါပြီလား။
ထိုအရာများသည် ခြိမ်းခြောက်မှုသက်သက်မဟုတ်ပဲ (ခြိမ်းခြောက်နိုင်စွမ်းသည်လည်းကောင်း၊ ခြိမ်းခြောက်လိုသော ဆန္ဒသည်လည်းကောင်း ကျွန်တော့်တွင် အမှန်တကယ်မရှိပါချေ) အမှန်တကယ် ဖြစ်နိုင်ချေများဖြစ်သည်ကို သင်တို့အနေဖြင့် စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ပါ၏။
အကယ်၍ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ယခုဖွဲ့စည်းပုံအား လက်ခံလိုက်လျှင် အနာဂါတ်တွင် စစ်တပ်သည် (၇၅)ရာခိုင်နှုန်းကိုပင် ကျော်လွန်ကာ မည်သို့လွှမ်းမိုးနိုင်မည်နည်း
ဖွဲ့စည်းပုံလေး ပြင်ချင်ရင်တောင်သူတို့ မထောက်ခံလျှင် ပြင်လို့မရဘူးဆိုသည်လောက်နှင့် စစ်ဖိနပ်အောက် ရောက်နေတော့မှာပေါ့ဆိုသည့် စကားလောက်နှင့် (ယခုကဲ့သို့ ရာနှုန်းပြည့် အုပ်ချုပ်မှုထက်ပင် ကျော်လွန်ကာ စစ်ဖိနပ်အောက်မည်သို့ ရောက်မည်ကိုနားမလည်ပါ)၊ ၉၀ ရလဒ်ငြင်းသလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ ဆိုသည်လောက်နှင့် အစရှိသော ပေါ့ပေါင်းများစွာလောက်နှင့် အခန့်မသင့်လျှင် နိုင်ငံတော်ပြိုကွဲသည်အထိပင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့် လမ်းကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့လျှောက်လှမ်းရန် သင့်ပါသည်လား။ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ထိုသို့ လျှောက်လှမ်းရလောက်အောင်ပင် ထိုက်တန်သည်ဆိုသည့် လက်မခံနိုင်စရာ ပြဌာန်းချက်အား သင်တို့တွင်ရှိသည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော့်အနေဖြင့် သိလိုလှပါ၏။
ကျွန်တော့်အနေဖြင့်မူ အဆိုးဆုံးဖြစ်သည့် စစ်တပ်သည် အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် အာဏာသိမ်းနိုင်သည်ဆိုပြီး ပြဌာန်းထားသည့် အချက်ကိုပင်လျှင် (အကယ်၍ စစ်တပ်မှအချိန်မရွေး အာဏာသိမ်းလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထည့်သွင်းခဲ့မည်ဆိုလျှင်တောင်) အချိန်မရွေးအာဏာသိမ်းနိုင်ကြောင်း ပြဌာန်းသည်ဟုမယူဆပါချေ။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရသစ်အနေဖြင့် (အန်အယ်ဒီပါတီဖြစ်ရန် များသည်ဟုယုံကြည်ပါသည်) နိုင်ငံအား ဘာကြောင့် အရေးပေါ်အခြေနေထိဖြစ်ရန်ပင် အုပ်ချုပ်ရမည်နည်း။ ထို့ကြောင့် ထိုအရာသည် မလိုအပ်သောပူပန်ရန်မလိုသည့် ပြဌာန်းချက်ဖြစ်၏။ (အခြားအသေးစိတ်အချက်များကိုမူ ဆောင်းပါလွန်စွာမရှည်စေရန်အလို့ငှာ နောက်ပိုင်းတွင် အလျင်းသင့်သလို ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပါသည်။)
အချုပ်ဆိုရလျှင် သင်တို့သည် မိမိယုံကြည်ချက်အတိုင်း တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓါတ်များ ထားရှိသည်ဆိုသော်လည်း ရလဒ်အားတွက်ချက်ရန်မမေ့သင့်ပါချေ။ စေတနာသန့်စွာဖြင့် နိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက် မိမိပြောဆိုနေမှုများ (blog ပေါ်တွင်ဖြစ်သော်လည်း) မိမိရေးသားနေမှုများသည် အကယ်၍များ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အနာဂါတ်တွင် အကျိုးယုတ်စေသည့် အကြောင်းအထောက်အပံ့အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သလို ဖြစ်သွားမည်ဆိုလျှင် သင်တို့သည် မည်သို့တာဝန်ယူကြပါမည်နည်း။ ကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည်ချက်အတိုင်းတိုက်ပွဲဝင်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း အကျိုးရလဒ်အား မစဉ်းစားသည့် မျက်ကန်းတိုက်ပွဲဝင်ပုံမျိုးဖြင့်မူ စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်ရန်မသင့်ပါချေ။ အထူးသဖြင့် ယခုအရာသည် နိုင်ငံအရေးဖြင်ချေ၏။ ပိုမိုလေးနက်စွာဆိုရလျှင် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံစုစည်းထားသည့် ရင်ကြားစေ့ရေးဆွေးနွေးနေရဆဲဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အရေးဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့် ပိုမိုလေးနက်စေရန် ထပ်မံမေးခွန်းထုတ်ပါမည်။
သင်တို့သည် ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါလျှင် မိမိရေးသားပြောဆိုခဲ့မှုများအတွက် မိမိကိုယ်တိုင်မည်သို့ တာဝန်ယူကြပါမည်နည်း။ မည်သူကမျှတော့ သင်တို့ရေးသားမှုအတွက် အပြစ်တင်ကြ အရေးယူကြမည်မဟုတ်ပေ။
ပြန်လည်ဖြေဆိုရန်မလိုပါ။ မိမိဘာသာမေးခွန်းထုတ်စဉ်းစားစေလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့်အဖို့မူ နိုင်ငံနှင့် လဲယူရန်ထိုက်တန်သည့် စနစ်သည်လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်မှုသည်လည်းကောင်း မရှိပါချေ။ နိုင်ငံသည်သာ အဓိကဖြစ်ပါ၏။
မှတ်ချက်။ ။ comment ဖြင့်ဆွေးနွေးလိုသူများ ရှိခဲ့မည်ဆိုလျှင် ပုံမှန်တွေ့နေကြဖြစ်သည့် ဟာ.. ဖွဲ့စည်းပုံထောက်ခံဘို့ စည်းရုံးနေတဲ့စာကြီးပဲ.. ဟိုဘက်ကကောင်ပဲ၊ မင်းကလာဆွဲနေတာလာဲးစသော comment များထက် အချက်အလက်အားထောက်ပြသော comment များကိုသာ မျှော်လင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်သည် အထက်ပါရေးသားသည့်အတိုင်း အမှန်ယုံကြည်ပြီး ထိုသို့သော လမ်းကြောင်းကိုပင် ရင်းကာ ကန့်ကွက်လိုသူများ၏ အကြောင်းပြချက်များအား အမှန်တကယ်လေ့လာလိုသောကြောင့် ဖြစ်ချေ၏။
ဤဆောင်းပါးအား နိုင်ငံရေး blog များအကြားကျယ်ပြန့်စွာ ရောက်ရှိစေရန်အလို့ငှာ မိတ္တူအား အောက်ပါ blog များသို့ ပေးပို့ပါ၏။
Posted by MyoMyanmar at 12:54 PM 1 comments
Road Map၊ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံများနှင့် ကျွန်တော့အယူအဆ
Road Map နှင့် ကျွန်တော့အယူအဆ
ကျွန်တော်သည် လက်ရှိတပ်မတော်အစိုးရမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအားအတည်ပြုကာ လမ်းစဉ်(၇)ရပ်အား အချိန်အတိအကျဖြင့် ပြုလုပ်မည်ဆိုသည့် ကြေငြာချက်အား ကြိုဆိုပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျပ်ရိုက်နေသည့် ထွက်ပေါက်မဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေအတွက် အပြုသဘောဆောင်သည့် အသင့်တော်ဆုံး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအဖြစ် မြင်ပါ၏။ အတန်ငယ်ရှင်းလင်းပါအံ့။
မြန်မာနိုင်ငံအား 1990 အနိုင်ရပါတီ (အန်အယ်ဒီ) သို့ အကြွင်းမဲ့ အာဏာအား အမြန်ဆုံးလွှဲပေးမည်ဆိုပါမူ
- လက်ရှိအာဏာကိုလွှဲပြောင်းယူမည့် လူများသည်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းသည်လည်းကောင်း များစွာ စနစ်တကျမရှိခြင်း၊ အခြေခံမူများ ဦးတည်ချက်များ လွန်စွာ ရှုပ်ထွေးနေခြင်း
- အဖွဲ့အစည်းတွင်းရှိ အထက်အောက်ဆက်ဆံရေးသည် များစွာပင်အာဏာရှင်ဆန်ခြင်း၊
- အတိုက်အခံများ၏ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာဦးတည်ချက်၊ လှုပ်ရှားချက်များသည် လက်ရှိအစိုးရပြုတ်ကျရေးသာ ဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် မည်သည့်အစီမံမျှ မရှိခြင်း (အံ့သြောဖွယ်ကောင်းသည်မှာ ထိုအစီမံများအား နှစ်ရက်သုံးရက်မျှဖြင့် ရေးစွဲပါမည်ဟု ဆိုလာသည့် နိုင်ငံရေးသမားထိပ်သီးကြီးများပင် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း)
**အတန်ငယ်အကျဉ်းမျှသာ ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုထက်ပိုမိုသော မြင်သာထင်သာရှိသည် ရှုပ်ထွေးမှုများ အားနည်းချက်များ၊ ယိုယွင်းမှုများ။ အပြင် ကျွန်တော့်အနေဖြင့် လေ့လာရန်လိုက်မမီနိုင်သည့် အရှုပ်ထွေးပေါင်းများစွာမှာ အဆိုပါပါတီအတွင်း ရှိနေသေးသည်မှာလည်း အထင်အရှားပင်ဖြစ်၏**
- ပြည်ပမှလှုပ်ရှားသူများ၊ အချို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ပြည်ပအထောက်အပံ့များကို နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ရှိသင့်သည့် မှီခိုမှုထက်ကျော်လွန်စွာ အန္တရာယ်ရှိလောက်သည့် အဆင့်တိုင် နယ်ကျွံနေကြခြင်း၊
- ထို့အတွက် ပြည်ပစွက်ဖက်မှုကို (ဝေစုခွဲမှုဟုဆိုနိုင်ပါသည်) လိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုခံရဖွယ်ရှိခြင်း၊
- တပ်မတော်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေးသည်သာ လိုရင်းဖြစ်ကာ လက်မရှောင်တွဲလျှက်ပူးပေါင်းခဲ့မှုကြောင့် ပြည်တွင်း သောင်းကျန်းသူသူပုန်များနှင့် အရှုတ်အထွေးများရှိလာနိုင်ခြင်း၊
- တပ်မတော်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်လျှင်ပြီးရောဆိုကာ အားပေးအားမြှောက်လုပ်ခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားခွဲထွက်ရေး လှုပ်ရှားမှုများအတွက် စာရင်းများရှုပ်လာနိုင်ခြင်း၊
- တိုင်းရင်းသားများဖြင့် ခွဲထွက်ခွင့် အရှုပ်အထွေးများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး အနောက်မှ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများ ရှိမည်ဆိုလျှင် (မည်သည့်နိုင်ငံမဆို မသမာသော ပြည်ပစွက်ဖက်မှုအား ခံရသည်သာဖြစ်၏) အာဏာရပါတီသည် တွန်းလှန်မှု မပြုနိုင်လောက်အောင် ယခုအနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း လိုသည်ထက်ပိုသော ပက်သက်ဆက်စပ်မှုများရှိနေခြင်း။
(ထိုသို့ ခွဲထွက်ခွင့်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ဒီမိုကရေစီ သမားများ blogger များသည် သတင်းစာများတွင် စာလုံးမဲကြီးများဖြင့် ကန့်ကွက်ရုံမှအပ မည်သို့မျှ ပြုနိုင်မည်မဟုတ်ဆိုသည်မှာ သတိပြုရမည့် အချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ဆိုသည်မှာ တိုင်းပြည်တည်မြဲရေးနှင့် စာလျှင် မည်သို့မျှနှိုင်းယှဉ်မရသော ပမွှားအခွင့်အရေးတစ်ခုဟုသာ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။)
ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပါဝင်သူများ၏ အနေအထား တို့တွင် စနစ်တကျရှိမှု အင်အားချိနဲ့လှသည့် အစိုးရမှ အုပ်ချုပ်မည့် ပြည်သူသည် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းမှုများကို ရင်ဆိုင်ထားရသည့် ပြည်သူဖြစ်နေခြင်း။
ထိုသို့ လေ့လာမိသောအခါ ထိုဒီမိုကရေစီအစိုးရ အုပ်ချုပ်သော နိုင်ငံ၏ အခက်အခဲများအား အထင်းသားတွေ့မြင်လာရပါ၏။ အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှုမှသည် စည်းကမ်းပျက်ယွင်းမှုမျိုးစုံတို့သည် သေချာစွာထိန်းမတ်နိုင်ခြင်းမရှိလျှင် ဒီမိုကရေစီသည် ထိုအရာများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသော စနစ်တစ်ခုဖြစ်လာလေ့ရှိသည်။
ထိုသို့ မနိုင်မနင်းအုပ်ချုပ်မှုများ၊ အကျင့်ပျက်စည်းကမ်းပျက်မှုများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ အရှုပ်အထွေးများဖြင့် ကသောင်းကနင်းဖြစ်လာပါက မည်သို့ဖြေရှင်းကြမည်နည်း။ လွှဲချစရာ တပ်မတော်အစိုးရလည်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဒီမိုကရေစီတွင် ဒီပါတီမကောင်းလျှင် နောက်ပါတီပြောင်းရုံပေါ့ဆိုသည်မှာ ပြောင်းစရာလူရှိရန်လိုပါလိမ့်မည်။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအောက်တွင် လှိမ့်ပိန့်ခံနေရသည့် ပြည်သူကြားမှ ထိုအခြေနေများကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်တွယ်နိုင်မည့်သူ မည်သူများပေါ်ထွက်လာမည်ဟုထင်ပါသနည်း။ ထိုအခြေအနေမျိုးဆိုက်ရောက်လာပါက တပ်မတော်မှ ပြန်လည်အာဏာသိမ်းရမည်လော။ ဒါမှမရတော့လည်း သိမ်းပေါ့ကွာဟု ဆိုလျှင်တောင် နိုင်ငံသည် တစ်ကပြန်စရပါတော့မည်။ ဒီအခြေအနေထိရောက်အောင် လက်ရှိအစိုးရသည် ဖိအားအမျိုးမျိုးအောက်မှ ကြိုးစားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ချေသည်။ သို့သော် ထုံးစံအတိုင်းပင် ဒီမိုကရေစီသမားများသည် နောင်ခါလာနောင်ဈေး၊ ခုရဘို့အဓိကဟူသောစိတ်ဖြင့် မကြံသင့်သည်များကိုပင် ကြံစည်လာကြသည် မဟုတ်လော။
ထို့ကြောင့် Road Map တွင် ရှိသော တပ်မတော်၏ 25 ရာခိုင်နှုန်းသည် ကသောင်းကနင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီသို့သွားကြမည့် အတွေ့အကြုံပိုင်းတွင်လည်းကောင်း၊ စိတ်ဓါတ်ရေးရာပိုင်းတွင်လည်းကောင်း open minded မဖြစ်သော ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓါတ်များ အားနည်းသေးသည့် နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ပြည်သူများအတွက် ရှိသင့်သော အထိန်းအကွပ်လေးတစ်ခုဟု ကျွန်တော်ခိုင်မာစွာမြင်ပါသည်။ ထင်သလောက်လွတ်လပ်ခွင့်ကို မရရှိသည်မှာ မှန်သော်လည်း မဖြစ်မနေ အစိုးရသစ်မှ ရင်ဆိုင်လာရမည့် အခက်အခဲများ (ကျွန်တော်သည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပါတီတွင်းအပြဲကွဲများကို မစဥ်းစားသေးပါ) အား ကူညီ ထိန်းကျောင်းရန် အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကို မထိခိုက်စေသော ပမာဏရှိသည့် အထိန်းအချုပ်တစ်ခုကို ထိုအစိုးရသစ်တွင် ထားသင့်သည်မှာ မှန်ကန်သောအယူအဆဖြစ်သလို နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုအားလည်း များစွာ အထောက်အကူပြုမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
သို့သော် နိုင်ငံရေးသမားများသည် ထိုRoad Map အကောင်အထည်ပေါ်ကာ အတည်ဖြစ်သွားမည်ကို စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် အပြင်းအထန်လှုပ်ရှားလာကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အချို့ဆိုလျှင် ဖွဲ့စည်းပုံသည် အဘယ်သို့ရှိသည်၊ မည့်သည့်အချက်ကြောင့် ဆန့်ကျင်သင့်သည်မျိုးကိုပင် မသိရှိပဲ အပြင်းအထန် စုံကန်ငြင်းနေကြသည်မှာ ကျွန်တော့်အဖို့ အံ့သြဖွယ်ပင်ဖြစ်၏။
ဒေါ်စုကြည်နှင့် အနောက်နိုင်ငံများသည်သည် ထို Road Map အကောင်အထည်ပေါ်သွားမည်ကို လွန်စွာစိုးရွံ့၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပန်းတိုင်သည် ဒီမိုကရေစီဖြစ်သော်ငြားလည်း ဒေါ်စုကြည်မပါသည့် ဒီမိုကရေစီဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပင်။ ဤနေရာတွင် ဒေါ်စုကြည်ဟု တိုက်ရိုက်သုံးနှုန်းရခြင်းမှာ အန်အယ်ဒီသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်အရွေးချယ်ခံနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ အနိုင်ရရှိရန်ရာခိုင်နှုန်းသည်လည်း လွန်စွာများသည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ထိုအခြေခံဥပဒေတွင် ပြဌာန်းလိုက်သည့် အခန်း(၃) နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ကဏ္ဍ၏ အမှတ်(၄) အပိုဒ်ခွဲ (စ) ပါ ပြဌာန်းချက်သည် (အသစ်ထွင်ထားသော ပြဌာန်းချက်မဟုတ်ပါ) သူမအား မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင် အကြွင်းမဲ့အာဏာရယူရန် ငြင်းပယ်လိုက်သော ပြဌာန်းချက်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် အနောက်အုပ်စုနှင့် သူမအား များစွာထိုခိုက်စေ၏။ အများစုသည်လည်း ထိုပြဌာန်းချက်သည် လက်ရှိအစိုးရမှ သူမအား ဖယ်ရှားချင်သောကြောင့် ဟု စွပ်စွဲကြ၏။ စဉ်းစားစေလိုသည်မှာ ထိုအရာသည် နိုင်ငံတစ်ခုအားအုပ်ချုပ်မည့်သူတစ်ယောက် မဖြစ်မနေရှိကိုရှိရမည့် အရည်အသွေးတစ်ခု ပင်မဟုတ်ပေလော။ မည်သည့် အတိုက်အခံမဆို ဒေါ်စုကြည်သည်သာ ထိုအမဲစက်မရှိခဲ့လျှင် မည်သို့မျှထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ပင် မလိုသည့် အချက်ပင်ဖြစ်၏။
အခြားတစ်ဖက်မှလည်း အစိုးရသည် ထိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား လူထုဆန္ဒခံယူလိုက်သည်နှင့် (ပြည်သူမှလည်း အစိုးရဆင်းလျှင်ပြီးရောဟုဆိုကာ ထောက်ခံမဲပေးကြမည်ပင်ဖြစ်သည်) အန်အယ်ဒီမှ တစ်ချိန်လုံးလက်ကိုင်ထားကာ လှိုင်လှိုင်အသုံးချခဲ့သည့် ပြည်သူ၏ထောက်ခံမှုနှင့် အညီဆိုသည့် စကားအား သုံးရန် များစွာခက်ဖွယ် ရှိသွားချေသည်။ အနောက်နိုင်ငံများအနေဖြင့်လည်း ထိုသို့အများပြည်သူဆန္ဒနှင့် အတည်ပြုခဲ့သည့် အခြေခံဥပဒေအား ဆန့်ကျင်ရန်၊ ထိုဥပဒေနှင့်အညီ ပေါ်ပေါက်သည့် ဒီမိုကရေစီ အစိုးရသစ်တစ်ရပ်အား ဆန့်ကျင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအား ဆက်လက်ဖိအားပေးရန်မှာ များစွာ ရုပ်ဆိုးလာဖွယ် ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် သူတို့သည် ထို Road Map အားဆန့်ကျင်ရန်အတွက် မြင်သာထင်ရှားသည့် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအား လက်ညှိုးထိုးလာ ကြရချေတော့သည်။ အခြားမည့်သည့် အကြောင်းပြချက်မျှ မခိုင်လုံချေပြီလေ။
ထိုအခါ မိမိဆန္ဒနှင့် နှုတ်ထွက်ပြီးမှ ပြန်ဝင်ရန် နေရာမရှိဖြစ်နေသည့် အရာကြီးသည် အတည်ဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီထွန်းကာလာမည်ကို အနောက်သည်လည်းကောင်း၊ အန်အယ်ဒီသည်လည်းကောင်း၊ ဒေါ်စုကြည်သည်လည်းကောင်း လွန်စွာစိုးရွံ့လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် လက်ရှိအစိုးရမှ ဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းမှုများ အီလေးဆွဲကာ သွားနေ့သည့်အချိန်မှာပင် ခပ်လျော့လျော့နေခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုများ၊ အနောက်ဖိအားများသည် အမှန်တကယ် ဒီမိုကရေစီသို့ အသွင်ပြောင်းသည့် ခြေလှမ်းတစ်ရပ်အဖြစ် အမျိုးသားညီလာခံအား ပြီးစီးအောင်ပြုလုပ်မည်ဟု လက်ရှိအစိုးရ ကြေငြာချိန်မှစကာမူ အပူတပြင်းနှင့် အားစိုက်လှုပ်ရှားလာကြသည်ကို ထင်းလင်းစွာပင်မြင်နိုင်ချေသည်။ ထိုသို့အမျိုးသားညီလာခံ ပြီးဆုံးအောင်မြင်လုပြီဟု ကြေငြာပြီးနောက်ပိုင်တွင် ဆက်တိုက်လာသော ပြည်တွင်းပြည်ပလှုပ်ရှားမှုများသည် အထင်ကရပင်ရှိလှ၏။ ယခုအစိုးရမှ ပြီးဆုံးအောင်မြင်လုပြီဟု ကြေငြာချိန်တွင်မှု မခံမရပ်နိုင်အောင် ပူပန်လာကြသည်မှာ များစွာပင် ထင်ရှားလှပါသည်။
ယခုမူ ဒေါ်စုကြည်သည် ဖခင်အားထပ်မံအသုံးချကာ ပြည်သူအား အဆိုးဆုံးပြင်ဆင်ထားရန်အထိပင် တိုက်တွန်းချေပြီ။ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံများအားလုံးသည်လည်း ထုံစံအတိုင်းပင် သံယောင်လိုက်ကာ မဆန့်ကျင်ဝံ့ပဲ အဖျက်လမ်းစဉ်အား အဝေးမှ လှုံ့ဆော်လာကြ၏။ Road Map ဖြင့်ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်သည် အထင်ကရရှိနေပြီးသည်ဖြစ်သောကြောင့် ထိုအဆိုးဆုံးပြင်ဆင်ရန်၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဒီမိုကရေစီသီးသန့်မဟုတ်တော့ပါ။ အကယ်၍ ကြေငြာခဲ့သလိုပင် တပ်မတော်၏ 25% ကို လက်မခံလိုသောကြောင့်ပါဟု ဆိုလျှင်တောင် ထို ၂၅% လေးအတွက် နိုင်ငံအား မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေကာ၊ အခန့်မသင့်လျှင် သူ့ကျွန်ဘ၀သို့ပင် ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်သည့် အခြေအနေသည် ထိုက်တန်ပါ၏လော။
္မဤနေရာတွင် အတိုက်အခံများအား တိုက်တွန်းလိုသည်မှာ သင်တို့သည် မိမိဦးတည်ချက်အား မိမိရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက်ရန်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်းထုတ်သင့်သည်မှာ
ထိုသို့ဆိုလျှင် ယခုလမ်းကြောင်းတွင် တပ်မတော်သည် အထိန်းအကွပ်သဘောမျှသာ ပါဝင်နေသည့်အတွက် နိုင်ငံသည် ယခင်တပ်မတော်အစိုးရအုပ်ချုပ်ခြင်းထက် များစွာသာလွန်သော ဒီမိုကရေစီအခြေအနေတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ထွက်ပေါက်တစ်ခုအဖြစ် လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အတန်ငယ်မနှစ်မြို့နိုင်ပါဆိုလျှင်တောင် နိုင်ငံအားအဆိုးဆုံးပြင်ဆင်ကာ တိုက်ပွဲဝင်ရန်မလိုအပ်ပါချေ။
ထိုသို့ဆိုလျှင်မူ သင်တို့ဆိုနေသည့် (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းသည် အာဏာခွဲတမ်းကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထို (၂၅%) သည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့် ဖော်ဆောင်နေသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရန်အတွက် မည်သို့မျှအရာမရောက်သည့် ပမာဏဖြစ်သော်လည်း အကြွင်းမဲ့အာဏာဖြင့် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသုံးပြုလိုသည့် သူများအတွက်မူ များစွာပင် မျက်စိစူးစရာ ပမာဏကြီးဖြစ်ချေ၏။ ထိုဦးတည်ချက်ရှိလျှင်မူ တိုက်ပွဲဝင်ရန်လမ်းကြောင်းအား အပူတပြင်း လျှောက်လှမ်းရမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအရာအား ပြည်သူသည် အတည်ပြုရန် မဝေး တော့ချေ။
မည်သို့ဆိုစေကာမူ အချုပ်အားဖြင့်တိုက်တွန်းလိုသည်မှာ သင်တို့သည့် မည်သည့်ဦးတည်ချက်၊ ယုံကြည်ချက်အား ကိုင်စွဲသည်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံအားမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့် ချစ်ပါ၊ နိုင်ငံတော်ကိုထိခိုက်စေမည့် ကိစ္စများအား ရှောင်ကြဉ်ကာ မိမိယုံကြည်ချက်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကြပါရန် လေးနက်စွာတိုက်တွန်းလိုပါသည်။
Posted by MyoMyanmar at 10:50 AM0comments
မေးခွန်းလေးတစ်ခု ထုတ်ပါရစေ.. ခုကိုမျိုးမြန်မာရဲ့ သူတို့ဘယ်တော့လာကြလေမလဲ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်မိချင်ဖတ်မိကြမဲ့ လူတွေထဲက ဆန့်ကျင်ဘက်အတိုက်အခံတွေ၊ blogger တွေ၊ ဒီမိုကရေစီဆိုသူတွေအားလုံးပေါ့ဗျာ.. ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်လောက်များ ဟာ ဟုတ်တယ်ဟေ့.. ဒါကတော့ သတိထားရမယ့် စိတ်ထားပဲ.. တဖက်ကတောင် (ကိုမျိုးမြန်မာကို တဖက်ကလို့ပဲယူဆမှာတော့ အသေအချာပါပဲ) ဝေဖန်လာရအောင် ငါတို့ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ဒီစိတ်ဓါတ် ပျံ့နေလို့များလား.. စပြီးတော့ပေါ့ဗျာ.. စဉ်းစားမိမဲ့လူများ ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိမယ်များ ထင်ပါလဲခင်ဗျာ.. 1% တောင် ရှိမယ်မထင်ပါဘူး.. အရင်ကဆို (၀%) ပဲ ထင်ထားတာဗျ.. ဆောင်းပါးမရေးခင်လေးကပ်ပြီး ကိုကဒေါင်း comment ၀င်တယ်.. ကိုမျုိးမေးတာကို ရွှေဘိုသားပြန်ဖြေထားတာတွေ ဖတ်ရတယ်.. ဒါကြောင့်မို့ နဲနဲ (၁%) ပေးလိုက်တာ…
ကျွန်တော်ဒီလိုမေးလို့ ကိုမျိုးဟာ တကယ့်ကိုနိုင်ငံရေးဂုရုကြီးမို့လို့ သူပြောသမျှ တလေးတစားလိုက်လေ့လာနေရမှာမျိုး ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်… သူလည်းလေ့လာသူသက်သက်ပါပဲ.. ကျွန်တော်ကိုမျိုးကို ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင် သူဟာ သူ့အမြင်တွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာလေး ပြောနိုင်တာကလွဲလို့ နိုင်ငံရေးစကားလုံးတွေ ကြီးကြီးသုံးပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြောနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတောင် မရောက်သေးဘူးဗျ.. (ဟီးဟီး.. ညနေကျရင်တော့ ဖုန်းလာပြီကောမလားမသိဘူး..) ကဲ.. ဆက်ရအောင်..
ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ရှင်းတယ်ဗျ.. ဒီဆောင်းပါးကပြောတဲ့စိတ်ဓါတ်ဟာ ဘယ်သူပြောပြော.. ဘာကောင်ကြီးပြောပြော.. ဘာကောင်လေးပြောပြော.. ဟုတ်တယ်.. ဒီဆောင်းပါးထောက်ပြခဲ့တဲ့အချက်ဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်.. ဒါ့အပြင် ခု နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံအုပ်စုတွေထဲမှာ ဒီစိတ်ဓါတ်ဟာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်နေတယ်.. ဒီမိုကရေစီအရေး၊ ဟိုအရေး၊ ဒီအရေးနဲ့ နိုင်ငံလွတ်လေးရေး ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ယှဉ်ရင် အာပလာအရေးလေးတွေမှာတောင် (နိုင်ငံလွတ်လေးရေး ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ယှဉ်ရင် ပြောတာနော်.. တော်ကြာ ဒီမိုကရေစီအရေးကို အာပလာအရေးပြောပါတယ်ဆိုပြီး ဖြတ်ညှတ်ဝေဖန်နေကြဦးမယ်..) သဲသဲလှုပ်နေကြတဲ့လူတွေဟာ ခုဒီစိတ်ဓါတ်ကို လစ်လျူရှုကြအုံးမယ်ဗျ.. ဟာ.. ဒီအန္တရာယ်ကို လက်ရှိအစိုးရ ပြုတ်ကျအောင်လုပ်ပြီးမှပဲ ပြောတော့မယ်.. ခုတော့ တိုင်းပြည်ဘယ်သူသိမ်းသိမ်း ဘယ်လောက်မွဲမွဲ ငါ့တို့ ဦးတည်ချက်အပျက်မခံနိုင်ဘူးကွဆိုရင်တော့လည်း အကိုတို့အမတို့ရေ ကျွန်တော်ဖြင့် ဘာပြောရမှန်းတောင် သိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာ..
ဟုတ်ပြီ.. ဘာကြောင့်သူတို့ ဒါကြီးကို လက်မခံလဲ.. စိတ်ထဲမှာ အန္တရာယ်ပဲဟေ့.. ငါတို့လည်း ဒီစိတ်ဓါတ်ကြီးပျောက်အောင် လှုပ်ရှားမှရတော့မယ် မဖြစ်လဲ..
တဖက်ကပြောတာဖြစ်နေလို့.. လက်မခံဘူး.. ရှင်းတယ်.. ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ blogger တော်တော်များများဟာ ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူတဲ့ ဆောင်းပါးကိုဖတ်တိုင်း ငါတို့ဘာများမှားနေလဲဆိုတဲ့ စိတ်ထက် ဘယ်လိုပြန်ဖဲ့ရမလဲဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ဖတ်ကြတာများတယ်.. တကယ်လို့ အမှန်ကြီးထောက်နေရင်တောင်.. စုန်ကန်ညင်းမယ်.. မရရင်ရူးချင်ရောင်ဆောင်မယ်.. ပြီးရင် တဖက်ကလို့ပြောမယ်.. ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲ.. တဖက်က အပြစ်မြင်ပြီးပြောတာဖြစ်သွားရော.. ကိုယ်မှားလို့မဟုတ်တော့ဘူး.. ပြင်စရာမလိုဘူး.. ဘာလို့လည်းဆိုတော့ blog တွေ တော်တော်များများကို ကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဗျာ.. ဒီမိုကရေစီကို ဝေဖန်တဲ့လူမှန်သမျှဟာ အစိုးရလူလို့ စွပ်စွဲခံရတယ်.. စကားလုံးတွေကတော့ စုံနေတာပါပဲ.. အံ့သြောစရာကောင်းတာက သူတို့တွေက ပြည်သူတွေထဲမှာ ဒါတွေကိုမြင်တဲ့လူတွေ၊ ဘာကိုမှ မျှော်လင့်လို့မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံအတွက် ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးသူတွေ အမှန်တကယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ မသိတာလား.. မသိချင်ရောင်ဆောင်တာလား.. ဒါမှမဟုတ် ပြည်သူတွေအားလုံး ငပိန်းတွေပဲလို့ ထင်တာလား..
အမှန်တကယ်ကို အဲဒီဆောင်းပါးထဲက စိတ်ဓါတ်ကြီး ၀င်နေလို့.. ရှင်းတယ်.. ကိုယ့်မှာ ဒီလိုဖြစ်ချင်စိတ်က တားမရဆီးမရပေါ်နေတယ်.. ဒါကိုဆန့်ကျင်ဘက်လူတွေက ကျွန်စိတ်ဘာစိတ်နဲ့ လာပြီးပြောနေတယ်.. ခပ်ရှင်းရှင်းပဲ.. ဆောင်းပါးထဲမှာ တိုက်တွန်းသလို ဘာမှအရေးတယူလုပ်ပြီး ခေါင်းချောက်ခံနေစရာလဲမလိုဘူး.. အရေးကြီးတာက ဘယ်လိုပင့်ရမလဲစဉ်းစားဖို့ပဲ.. ဒါကိုကာကွယ်ဖို့ကတော့ လွယ်ပါတယ်.. ဒီကောင်တွေကတော့ ပြောမှာပေ့ါ.. တဖက်ကလူကိုးဆိုပြီးတော့ကို ရူးချင်ရောင်ဆောင်လိုက်ရုံပဲလေ.. ဘယ်ဒီမိုကရေစီသမားဆိုသူကမှလည်း အပြစ်ပြောရဲမှာမဟုတ်ဘူး.. ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကိုယ့်လူအပြစ်ပြောပြီး ဟိုဘက်ကပြောတာ မှန်တယ်ကွဆိုရင်တော့ ကန်ထုတ်ခံရမှာကိုးဗျ.. အာဏာရှင်ဆန်ပုံပြောပါတယ်..
ဟုတ်ပြီဗျာ.. ဒီတော့ ဒီမိုကရေစီသမားပါလို့ အော်နေတဲ့လူတွေ၊ ချစ်ပြနေတဲ့လူတွေအတော်များများဟာ open minded မဖြစ်ကြဘူးဗျာ…. သူတို့ဟာ ဘာကိုစိုးရိမ်မှန်းမသိရလောက်အောင် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ဝေဖန်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ အတင်းစုံကန်တတ်ကြတယ်ဗျ.. သိပ်အံ့သြောဖို့ကောင်းတယ်.. သဘောကွဲလွဲခွင့်တွေ၊ ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ အသားမကျကြသေးဘူး.. ဒီတော့ သူတို့အော်နေတဲ့ ဆွေးနွေးမှုကို ဘယ်လိုစမလဲ.. ငြင်းခုန်မှုကတော့ စတာ19 နှစ်ကျော်ပြီဗျ…
အာဏာကိုစွဲကိုင်ထားချင်သေးတဲ့အစိုးရနဲ့.. တိုင်းပြည်မပြိုကွဲဖို့ဆိုတဲ့ အဓိကအကြွင်းမဲ့ မှန်တဲ့အချက်လေးမှာတောင် တဖက်ကပြောတာမို့ နှာစီးချင်ရောင်ဆောင်နေတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်လမ်းလွဲ အတိုက်အခံတို့ဟာ ဘာတွေများ ဘယ်လိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှာတဲ့လဲ.. နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံအတွက် လို့ဆိုတာဟာ အော်ပြနေရုံနဲ့ မရပါဘူး.. (ဒါဟာ နှစ်ဖက်လုံးကိုပြောတာပါ..)
မကြာခင်မှာ ဒါလေးကိုအခြေထားပြီး Road Map နဲ့ပက်သက်တဲ့ ကျွန်တော့်အမြင်လေးပြောချင်တယ်ဗျာ..
Posted by MyoMyanmar at 11:13 PM0comments
ဤခေါင်းစဉ်သည် ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံအင်အားစုများ၊ ပြည်ပတွင် လှုပ်ရှားနေကြသည့် ရောင်စုံအဖွဲ့ပေါင်းစုံ၏ အကြားတွင် ပြန့်နှံ့နေပြီး ပြည်သူများအကြားတွင် ပြန့်ပွားလာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနေသည့် ကြောက်မက်ဖွယ်စိတ်ထားတစ်ခုအကြောင်း ဆွေးနွေးလိုခြင်းဖြစ်၏။
ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံရေးသမားများသည် ယခင်ကာလများက ထိုအရာအား စိတ်တွင်း၌သာကြိတ်ကြံကာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မပြောဝံ့ကြသော်လည်း ယခုအခါတွင်မူ ထင်ထင်ရှားရှားကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာကြကာ ပြည်သူများအကြားတွင်လည်း ထိုရှက်ဖွယ်ကောင်းသောစိတ်ဓါတ်သည် ပုံမှန်တစ်ခုအဖြစ်သို့ ရောက်လာနေသည်ကို ထင်ရှားစွာပင်တွေ့ရပါသည်။ ထိုအယူအဆစိတ်ထားသည် 1885 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တွင် မြန်မာပြည်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးသော အနေအထားနှင့် များစွာတူညီလေ၏။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ရှင်းလင်းစွာပြောရမည်ဆိုလျှင် ထိုအရာသည် ကျွန်စိတ်ပင်ဖြစ်သည်။ လွန်စွာရှုတ်ချသင့်သော၊ အမိမြေအတွက် ရင်နာဖွယ်ကောင်းသော၊ ရှက်ဖွယ်ကောင်းသလို၊ ကြောက်မက်ဖွယ်လည်း အလွန်ကောင်းသည့် စိတ်ထားပင်ဖြစ်၏။ ထိုစိတ်ထားသည် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျုိးတစ်ခုလည်းဖြစ်ချေသည်ဟု ကျွန်တော်ယူဆပါသည်။
အမိမြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အချာအာဏာအား တိုင်းတပါးစစ်တပ်များဖြင့် သိမ်းယူကာ မိမိတို့အလိုရှိသည့် လူတစ်ယောက် (ပါတီနှင့်စနစ်မဟုတ်ပါ) အား အာဏာပေးစေရန်မှာ ထားသင့်သည့်စိတ်ထားဖြစ်ပါသလား။ ကျွန်တော်ယုံကြည်သည်မှာမူ နိုင်ငံနှင့် လဲယူရန်ထိုက်တန်သည့် စနစ်သည်လည်းကောင်း၊ ကြွယ်ဝမှုသည်လည်းကောင်း၊ မရှိပါချေ။ ဒီမိုကရေစီသည် နိုင်ငံအားအထောက်အပံ့ ဖြစ်ရန်သာဖြစ်ချေသည်။ နိုင်ငံနှင့် လဲယူလောက်အောင် ထိုက်တန်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။ သို့သော် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးသမားများထဲတွင် ထိုသို့ ပြည်သူအားနည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြင့် ထိန်းကျောင်းလမ်းပြပေးနိုင်မည့် သူမျိုးမပေါ်ပေါက်ခြင်း၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မရှိခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကံဆိုးမှုပင်ဖြစ်ချေ၏။
ထိုအတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားများအနေဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်ကို သုံးသပ်သင့်သည်မှာ ယင်းတို့မှ ဖိနှိပ်ပါသည်၊ လမ်းကြောင်းမှားနေပါသည် ဟုစွပ်စွဲနေသည့် လက်ရှိတပ်မတော်အစိုးရသည်ပင်လျှင် မျိုးချစ်စိတ်ကို အခြေခံလက်ကိုင်ထားနိုင်ပါသေးလျှင်၊ ကြွေးကြော်နိုင်ပါသေးလျှင် အဘယ်ကြောင့် နိုင်ငံအတွက်လှုပ်ရှားနေပါသည်ဟု ယုံကြည်ထားသည့် မိမိတို့သည် မျိုးချစ်စိတ်ကို အခြေခံလက်ကိုင်ထားသည့် လမ်းကြောင်းကို မလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါသနည်း ဆိုသည်ကိုပင်။ သင်တို့သည် သတိထားမိပါသည်လား။ အဘယ်ကြောင့်ပါနည်း။
အခြားတစ်ဖက်မှ ဘေးအမြင်ဖြင့် သုံးသပ်ကြည့်ပါဦးမည်။ အကယ်၍ တပ်မတော်အစိုးရအနေဖြင့် မျိုးချစ်စိတ်ဆိုသည်မှာ သူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် အပြကောင်းနေသောကြောင့် နိုင်ငံချစ်စိတ် မျိုးချစ်စိတ်အား လက်ကိုင်ပြုထားသည်ဟု ယူဆကြည့်မည်ဆိုပါစို့။ ထိုသို့ဆိုလျှင် အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားများသည် သူတို့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွင် မျိုးချစ်စိတ်အား အခြေခံမထားခြင်းမှာ မျိုးချစ်စိတ်သည် သူတို့အာဏာရရှိရေးအတွက် တားဆီးထား သောအရာတစ်ခု၊ ခလုတ်ကန်သင်းတစ်ခု ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပင်လော ဆိုသည်ကိုပင်။ ဤကောက်ချက်ကို ကျွန်တော့်အနေဖြင့်ဆိုရခြင်းမှာ အတိုက်ခံတို့၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတိုင်းသည် လက်ရှိအစိုးရအားမဟုတ်ပဲ၊ နိုင်ငံကိုသာ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ထိခိုက်စေခြင်း၊ မျိုးချစ်စိတ်အား အခြေထားသော လှုပ်ရှားမှုမျိုး မရှိကြခြင်း၊ ပြည်ပအား လိုသည်ထက်ပိုစွာ အောက်ကျို့ရာမှ နောက်ဆုံးတွင် နိုင်ငံကိုပါထိုးအပ်ရန်ထိ အတင့်ရဲစွာ ကြံစည်ကြခြင်း စသည့်ခြေလှမ်းများအား လေ့လာမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ချေသည်။
အချို့သူများသည် နိုင်ငံအင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ရသည်ကိုပင် နောင်တရသလိုပြောဆိုလာကြသည်ကိုလည်း အံ့သြောစွာတွေ့ရ၏။ တကယ့်အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးအုပ်စုများထဲတွင် ထိုသို့ပြောလာကြသူများအားတွေ့ရခြင်း၊ ထိုသူများကပင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား ဟန်ဆောင်ချစ်ပြနေခြင်းမှာ ကျွန်တော့အဖို့မူ ရှေ့ကဖုန်းနောက်ကပေါ်ဆိုသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ချေ၏။ ပိုမိုစိတ်ပျက်စေသည်မှာ ထိုသို့ပရမ်းပတာပြောသူမျိုး ပေါ်ပေါက်သည့်အခါမျိုးတွင်ပင်လျှင် စကားထက်လေ့ရှိသည့်၊ အပြစ်ရှာပြောရာတွင် လွန်စွာတော်သည့် အခြားသောဒီမိုကရေစီအင်အားစုများသည် ရှုတ်ချခြင်းပြုရန်၊ ထိန်းသိမ်းတားဆီးရန် မေ့လျော့နေကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ဥရောပမှ ပညာရှင်တစ်ဦး (အမည်မမှတ်မိပါ။ မောင်ကောင်းထိုက်စာစုများတွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်) ၏ စကားသည် ကျွန်တော့်အား ထိုသို့ ပြည်ပတပ်များအား ၀င်ရောက်သိမ်းယူစေလိုသည့် နိုင်ငံရေးသမားများအား ကြည့်ကာ များစွာအရှက်ရစေပါသည်။ ထိုစကားမှာ “ကျွန်ဖြစ်ရမှာကို သိမ်ငယ်တယ်လို့ မခံစားရတဲ့လူတွေဟာ ကျွန်ပဲဖြစ်ထိုက်တယ်“ ဆိုသောစကားပင်ဖြစ်၏။
ထိုသို့လျှင် နိုင်ငံချစ်စိတ်သည် အာဏာတည်မြဲရာလမ်းကြောင်းဖြစ်သူတို့က ချစ်ပြကြ၊ အာဏာပျက်စီးရာလမ်းကြောင်းဖြစ်သူတို့က ထိုနိုင်ငံချစ်စိတ်အား စွန့်ပယ်ကြသည့် နိုင်ငံရေးသမားများသည် အမှန်တကယ်တွင်မူ မည်သူ့မည်သူမျှ အမိနိုင်ငံတော်အကျိုးထည့်တွက်ခြင်းအား မည့်သည့်နေရာတွင်မျှ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် မမြင်ရခြင်းသည် ၀မ်းနည်းဖွယ်ပင်ဖြစ်ချေသည်။
ယခင်ကသမိုင်းတွင် အနောက်ကိုယုံစားမိသောကြောင့် ရာစုနှစ်ချီအောင် ဘ၀နှင့်ရင်းကာ ရရှိခဲ့သည့် ကျွန်ဘ၀သင်ခန်းစာများအားလည်း သတိထားမိကြပုံမပေါ်ပါချေ။ ထိုအချိန်က နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့၏ ကြီးမားသောအင်အားကို မယှဉ်နိုင်သောကြောင့်သာဟူသော အမှန်တကယ်လည်းဟုတ်သည့် ထင်းလင်းလှသောအဖြစ်၏နောက်ကွယ်တွင် မြန်မာ့ပြည်တွင်းအကွဲအပြဲများ၊ အမတ်များဝန်မင်းများ၏ အနောက်မျှော်စနက်များသည် ထိုကျွန်ဇာတ်သွင်းစီမံကိန်းတွင် အခိုင်အမာအထောက်အပံ့တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သည်ကိုလည်း သင်ခန်းစာယူကြရမည်သာဖြစ်၏။
စစ်ရေးအရဖြေရှင်းခြင်းသည် မှန်ကန်သော၊ အောင်မြင်သော နည်းလမ်းမဟုတ်သည့်အပြင် ထိုအရေးယူခံရသည့်နိုင်ငံ၏ အခြေအနေအားထိန်းသိမ်းရန် လွန်စွာခက်ခဲသည်ဟု ကုလသည်လည်းကောင်း အမေရိကန်သည်လည်းကောင်း၊ လက်ခံထားပြီးဖြစ်၏။ သို့သော် မည့်သည့်အခါတွင်မျှ အရှည်ကိုမတွေးတတ်သည့် နိုင်ငံရေးသမားများသည် ထိုအချက်ကိုလစ်လျူရှုကာ လက်ရှိအစိုးရပြုတ်ကျပြီး သူတို့အာဏာရလျှင်ပြီးရောဆိုသည့် လမ်းကြောင်းအား အတင်းပင်ချည်းကပ်လာကြသည်ကို တွေ့ရ၏။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားအစဉ်အဆက်၏ ကြုံလာမှပဲ ရှင်းလိုက်တော့မယ်၊ ကြိုပူစရာမလိုပါဆိုသည့်စိတ်ဓါတ်သည် လွန်စွာပင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ချေ၏။ ထိုနိုင်ငံရေးသမားများ၏ ဦးဆောင်မှုတွင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဖြင့် brain wash လုပ်ထားခြင်းခံရသည့် ပြည်သူသည် ဘာကိုမျှမစဉ်းစားနိုင်ပဲ ပါလာရချေသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရမည်ဆိုလျှင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် လွဲမှားသော အယူအဆများဖြင့် လွန်စွာအန္တရာယ်ကြီးသည့် လွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးနိုင်သော အနေထားသို့ရောက် အမှန်တကယ် ရောက်နေပြီဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။ ထိုအရာအား သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် မခွဲနေပဲ အမှန်တကယ်လမ်းကြောင်းတည့်မတ်ရန် အရေးအတကြီး လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တပ်မတော်အစိုးရသည်လည်းကောင်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အတိုက်အခံများသည်လည်းကောင်း ပြည်သူအား မှန်ကန်သောစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ထိန်းကျောင်းတည့်မတ်ကာ နိုင်ငံအား ကမ္ဘာ့အလည်တွင် သိက္ခာနှင့်ပြည့်စုံသည့် နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ပေါက်အောင် ကြိုးပမ်းပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
“သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ” ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ထိုသို့ ပြည်ပတပ်များအား ဖိတ်ခေါ်မည်ဆိုပါလျှင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အောက်ပါအချက်များအား ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁) စစ်ဘေးဒဏ်ခံရမည့် နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူအခြေအနေ။
၂) စစ်ပြီးစကာလ နိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုများနှင့် မင်းမဲ့စရိုက်များ လွှမ်းမိုးနိုင်မှုအလားအလာ။
၃) နိုင်ငံခြားတပ်များ၏ နှစ်ရှည်လများစွဲဝင်ရောက်မှုနှင့် ထိုအရာတို့၏ အကျိုးဆက်များ။
၄) ပြည်ပနိုင်ငံများမှ အာဏာတင်ပေးသည့် အစိုးရတစ်ခု၏သိက္ခာ၊ နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူတို့၏ သိက္ခာနှင့်
၅) ဆယ်စုနှင့်နှင့်ချီကာ ကြာမြင့်နိုင်သည့်၊ မျက်နှာကြည့်နေရမည့် နိုင်ငံရေးစွက်ဖက်ခံရမှုများတို့ ဖြစ်၏။
လေ့လာရင်း ခေါင်းစဉ်များထပ်မံ တိုးလာနိုင်ပါသေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခု၏ အကြမ်းဖက်သိမ်းယူခြင်းကို ခံရလျှင် အဆိုပါနိုင်ငံ၏ အခြေနေဆိုးရွားမျှုမှာ လွန်စွာများပြားနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ချေသည်
Posted by MyoMyanmar at 7:27 AM4comments
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ နှင့် ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှ ရောက်တက်ရာရာအတွေးများ
ရုံးထဲကလှမ်းထွက်လိုက်တော့ အချိန်က (၇)နာရီတောင်ထိုးတော့မယ်.. ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ ညရောက်တာကလည်းစောတာမို့ လုံးလုံးကြီးကို မှောင်နေပါပြီ.. Trader Hotel နဲ့ sakura က နှစ်သစ်ကြိုဖို့ ထွန်းထားတဲ့မီးတွေ၊ လမ်းမီးတွေ၊ ဆူးလေဘုရားက မီးတွေနဲ့ မြို့ထဲမှာထိန်လင်းနေပေမဲ့ မီးပျက်ရက်မို့ ကျွန်တော့မြို့သစ်က ရပ်ကွက်လေးကတော့ မှောင်နေမှာပါလေ.. တိုးဝှေ့သွားလာနေတဲ့ လူအုပ်ထဲကနေပဲ ဆူးလေကားဂိတ်ကို လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်.. နှစ်သစ်ကူးတော့မှာ မို့လားတော့မသိဘူး.. လူတွေက အနည်းနဲ့ အများတော့ တက်ကြွနေကြသလိုပါပဲ.. လာတဲ့ကားတွေကို တိုးဝှေ့ပြေးတက်နေကြတဲ့ လူအုပ်စုက များတာရော၊ အိမ်ရောက်ရင်လည်း ဖယောင်းတိုင်နဲ့ နေရမှာ ပျင်းတာရောနဲ့ ကျွန်တော် ခရေပင်အောက်ကရပ်ပြီး နည်းနည်း စောင့်နေလိုက်တယ်.. လူတွေကတော့ အရောင်အသွေးအစုံပါပဲ.. ၀န်ထမ်းတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ အလုပ်သမားတွေ၊ ပြီးတော့ မှန်းလို့မရတဲ့လူတွေ...
သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တွေးနေမိတယ်... ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူအများစုဟာ စမတ်ကျကျ ရုံးတက်နိုင်လောက်အောင် အခြေနေမပေးတာတော့ အမှန်ပဲဗျ.. အများအများစုဟာ ငွေကြေးပူပန်မှုတွေကိုယ်စီနဲ့ ကိုယ်ရတဲ့ငွေကို စိစစ်သုံးနေကြရတာချည်းပဲ.. လူနေမှုအဆင့်အတန်းဟာလည်း တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ရင်နိမ့်ကျတာပဲ.. ဘာကြောင့်လဲဗျာ..
အများစုကတော့ လက်ရှိအစိုးရကို လက်ညှိုးထိုးကြမှာပဲ.. ဒီမိုကရေစီမရှိလို့.. စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်လို့.. ဖိနှိပ်လို့.. လာဘ်စားလို့.. အား..စုံနေမှာပါပဲ.. ဟုတ်လား.. မဟုတ်ဘူးလား.. ဒါဆိုလည်း ဘာလို့ ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ ပြည့်ပြီး ကျပ်တည်းနေ၊ အကျပ်တွေ့နေတဲ့ ပြည်သူကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဆိုတာတွေ ထပ်လုပ်နေလဲ..
ပီးတော့ ပိတ်ဆို့မှုတွေကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တော့မယ် ဆိုတာကို ၀မ်းသာအားရ သတင်းတွေကြေငြာနေကြတာလည်း ရေဒီယိုတွေမှာ၊ အင်တာနက်တွေမှာ မြင်နေရတယ်ဗျာ.. ပြည်သူဟာ တော်တော်ကြပ်နေပါပြီဗျာ.. ဘာကြောင့်များ ထပ်ဖိအားပေးချင်ရတာလည်း.. ပြည်သူမှာ တဖက်ကလည်း ဖိနေတယ်.. ဒီဘက်ကလဲ ထပ်ဖိတယ်.. ကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စအတွက် အပီခံနေရတယ်.. ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီမိုကရေစီ မရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေ အများကြီးထဲကမှ ဘာလို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုမှ ဒီမိုကရေစီမသုံးလုိ့ဆိုပြီး ဒဏ်ခတ်ချင်တာလည်း.. မြန်မာပြည်သူကို မင်းတို့ဟာ စစ်အစိုးရကို အသက်စွန့် မတော်လှန်သရွေ့ ငတ်ပြတ်နေအောင် လုပ်ပစ်မယ်.. မင်းတို့နိုင်ငံ မကြီးပွားစေရဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ထပ်ဖိဖို့ ကြိုးစားနေတာဟာ မရက်စက်လွန်းဘူးလားဗျာ..
ဖတ်ဖူးတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်က နှစ်သက်မိတဲ့စကားလေးတစ်ခုလည်း တွေးမိပါတယ်.. စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ဒဏ်ခတ်ရအောင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘာအပြစ်ရှိလုိ့လဲ.. သူတို့တွေကရော ဘာမို့လို့ ဒဏ်ပေးပါတယ် ဘာတယ်နဲ့ လာကြောနေတာလည်း.. ဘယ်သူက သူတို့ကို ဒဏ်ပေးပိုင်ခွင့်တွေ ပေးထားလို့လည်း... ကိုယ်တွေကရော ဘာတွေမို့လို့ သူတို့ဒဏ်ပေးတာခံနေရတာလည်း.. ဒါဆိုရင်တော့ ပြည်သူဟာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ခံနေရတာတင်မကတော့ ပါဘူး.. စော်ကားခံရတာပါဖြစ်နေပါပြီ..
နောက်ပြီး ဒီပိတ်ဆို့မှု ကိုလက်ယက်ခေါ်ကြတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ.. ထောက်ခံကြသူတွေ.. သူတို့က စစ်အစိုးရဟာ ရက်စက်ပြီးဖိနှိပ်တယ်လို့ အော်နေကြတယ်.. ဒါဆို အဲဒီဖိနှိပ်တာကို ပြည်သူက အသက်စွန့်မတော်လှန်သရွေ့ မွဲတေအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောလား.. နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူကို တကယ်ချစ်ရင် ဘယ်သူ အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ကောင်းစားပါစေလားဗျာ.. ဘယ်ကလာကောင်းစားရမှာလဲ သူတို့အိတ်ထဲပဲရောက်သွားမှာလို့ ရမ်းသမ်းပြောပြီး နိုင်ငံကို ဒီလောက်ထိ နိမ့်ကျစေမယ့် နည်းလမ်းကိုရွေးခဲ့တာတော့ ပရမ်းပတာ နိုင်လွန်းပါတယ်.. ရှင်းရှင်းပြောရင် အဓိကပန်းတိုင်ဟာ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးကောင်းစားဖို့ မဟုတ်ဘူးလား.. ဒီမိုကရေစီဆိုရင် ကောင်းစားနိုင်တယ်ဆိုပြီး ဒီမိုကရေစီတာမဟုတ်ဘူးလား.. ဒီမိုကရေစီပဲသုံးရမယ်.. ခုစစ်အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်နေတယ်.. သူမဆင်းပေးသေးဘူး.. ဆင်းမှာလဲမဟုတ်ဘူး.. အဲဒီတော့ မင်းတို့ သူ့ကိုမတော်လှန်သရွေ့.. နိုင်ငံဒီမိုကရေစီမရှိသရွေ့ မွဲတေနေရမယ်ဆိုတာလား... အသက်စွန့်ဖို့ဆိုတာ တော်ရုံသတ္တိနဲ့မရပါဘူး.. ငတ်လွန်းလာပြီကွာ ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ ဆိုပြီး လူစိတ်ပျောက်လောက်အောင် ဖြစ်လာမှပဲ ရမှာပါ.. ပြည်သူကို အဲလောက်ထိသုံးပြီးမှ အောင်ပွဲခံမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရက်စက်မလွန်းဘူးလား..
ပြည်သူကို နှစ်ဖက်လုံးက ထွက်ပေါက်မရှိအောင် ပိတ်ရိုက်နေတဲ့ ပုံစံဟာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး.. နိုင်ငံဟာ ရက်စက်လှတဲ့ အာဏာလုပွဲမှာ ပြားပြားဝပ်နေရပါပြီ.. ဒါဟာ.. ဒီလိုနိုင်ငံရေးသမားတွေရှိတာဟာ အမိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကံဆိုးမှုပါပဲ..
သေဆိုသေ ရှင်ဆိုရှင်ဆိုတဲ့ သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်တောင် တိုးတက်တဲ့အမြင်တွေနဲ့ သူ့ဘာသာကျဆုံးသေးတာပဲ.. ပြည်သူကို အမြင်ကျယ်အောင် စီးပွားရေးဖွင့်ပေးပြီး ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း ရလာအောင် ဘာလို့မကြိုးစားချင်ရတာလဲ.. ကြာမှာပေါ့ဆိုရင်လည်း ခုကောမြန်နေလို့လား.. ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပိတ်ပါဆို့ပါနဲ့.. လက်ရှိအစိုးရပြုတ်ကြားတာကလွဲလို့ ဘာကောင်းသတင်းမှ မကြားချင်တော့တာဟာ ဘာကြောင့်များလဲ..
အတွေးတွေစုံပြီး ခေါင်းရှုတ်လာတာနဲ့ ကြည်နေတဲ့စိတ်တောင် ပျောက်သွားသလိုပါပဲ... ကိုယ်ပဲ လိုက်မမီတော့တာလား သူတို့ပဲ ဆန်းပြားလွန်းတာလား...
ဆက်မတွေးချင်တော့တာနဲ့ ကျွန်တော် ခရေပင်အောက်ကထွက်လာလိုက်တယ်.. တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကိုယ်ပေါ်ကိုကြွေကျလာတဲ့ ခရေပွင့်လေးက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကဗျာဆန်သွားစေသလိုပဲ.. ကျွန်တော့်ကို နှစ်သိမ့်တာထင်ပါရဲ့.. တိုးကြပ်ဆဲ ဘတ်စကားပေါ် ကျွန်တော်တိုးတက်လိုက်တယ်.. ခုမှလခလေးထုတ်လာတာမို့ လူကနဲနဲတော့ စိတ်ပေါ့ပါးနေသလိုပါပဲ.. ဘတ်စကားပေါ်မှာလည်း ရီသံတွေ၊ စကားသံတွေ နဲ့ ဆူညံနေတာပဲ..
မြန်မာတွေဟာ ရောင့်ရဲလွယ်ကြတယ်.. မေ့ပျောက်လွယ်ကြတယ်.. ချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဗျာ.. ကျွန်တော်ကတော့ စပါယ်ရာအော်သံ.. ခရီးသည်တွေကြပ်သပ်တိုးဝှေ့သံ.. ဘဲဥတွေဝီစီသံ... လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ဘော်လုံးပွဲအားပေးသံ.. ဈေးသည်တွေအော်သံ.. အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုအသံ.. အိမ်ဘေးကတိုင်းရင်းသူလေးတွေအသံ အားလုံးကို နှစ်သက်တယ်ဗျာ.. ကျွန်တော့်နိုင်ငံဟာ ချစ်စရာပါ..
ဒီနိုင်ငံကို တိုးတက်ပါစေလားဗျာ.. ဘာကြောင့်မှ ပြစ်ဒဏ်မခတ်ပါနဲ့တော့..
ကျွန်တော့်ကားဟာ အသံကျယ်ကြီးအော်ပြီး ပြေးနေပါပြီ.. ၂၀၀၇ ကိုထားခဲ့ပြီး ပြေးနေသလိုပါပဲ.. ၂၀၀၈ ဟာမကြာခင်ရောက်ပါတော့မယ်.. အဲဒီနှစ်သစ်မှာ ကျွန်တော့်နိုင်ငံ၊ ကျွန်တော့်လူမျိုးတွေအားလုံး မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံဖို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ..
ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ အမှတ်တရ
Posted by MyoMyanmar at 5:09 AM 1 comments
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ နှင့် ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှ ရောက်တက်ရာရာအ...
အချုပ်အခြာအာဏာအရေးနှင့် မြန်မာ့အတိုက်အခံများအပေါ် အ...